SAYLAC: Wasiir Cali Xaaji Xaamud Jibriil(Saddex iyo Nus), Waa Xirsiga Saylici. « HiilDan.Com
Home › Warka (News) › SAYLAC: Wasiir Cali Xaaji Xaamud Jibriil(Saddex iyo Nus), Waa Xirsiga Saylici.
SAYLAC: Wasiir Cali Xaaji Xaamud Jibriil(Saddex iyo Nus), Waa Xirsiga Saylici. By hiildan on April 29, 2012	• ( 156 )
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Xulka Heesaha iyo Heestii Indho Deeralay..!TACSI: Raxmatullaah Calayhi Aabahay Suldaan Yuusuf Suldaan Caateeye Suldaan Faahiye »Categories: Warka (News)	Related Articles
Gobolka Awdal Iyo Geesiga Axmad-Guray: Haybad Waxad Ku Leedahay Dalkaaga Hooyo	Gabilay Oo Fardo Kusoo Galbisay Geesi Samatar	Professor Samatar Oo Dhunkuday Ciidiisa Hooyo: Haybad Waxad Ku Leedahay Dhulkaaga Hooyo	Gobsanaa Haweenkayagu…!	Daawo Xaflad Baroor Diiq Ah Oo Jaaliyadda Soomaaliyeed Ee London UK, U sameeyeen Dr Cumar Cusmaan Raabe(AUN).	Anba Waan Jeclaa Inaan Soo Dhakhsadee, Walaweyntiibaa Jidka Igu Xayiray: Welcome Dr Samatar To Your Fatherland Of Somaliland..!	156 replies	»
hiildan	April 29, 2012 • 10:42	Shabakadihii awalba Rayaale ku raacay in Salal Ciise la siiyo, waxay imikana soo qoreen in Mujaahid Cali-Madaale- Xaaji Xaamud Jibriil uu Saylac ka abuuray qalalaase.
Waar waad dhoohantihiine, Muj Wasiir Cali waa saddex wasiir iyo nus, waana muwaadin dhab ah oo ab iyo isir reer Awdal ah. Waxan sugnaaba waa badhasaabka Salal oo deg-deg loo casilo , oo lagu badalo H/Xuseen iyo HarowoNews oo hawada laga saaro
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 10:49	Hiildan merci huuno, inaadeerkay ali xaamud alaah ha daayo, badhasaabka salal ha la qaado…
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 10:56	Adaa mudan Haboon,
‘qarsoodi wuu dhammaadee kay qallooc la tahayoow, anagu madaxdii qarankaan nahay’…!
Reply ↓	gudoon	April 29, 2012 • 14:13	aan ku saxo heesta waa anaga QUUDHSI DIIDNAY,,anigu halkaa ban ku dhaafaya becouse waan jeclahay in saylac kusoo noqoto gacanta gadabuursi calina waa mawadin dhulkiisa jooga haduu awdalstate soo raaci laha wasiirka difaaca ka dhigi lahaa ,,marka good bye god bless awdalstate
Reply ↓	Ali-Durgiye	April 29, 2012 • 11:37	Rasaasta u rida bari iyo galbeed mahadcasoow karis xuna iyadaa ku wax la, hadaad lugta tartiib u dhigi waydaan ogaada Boon iyo Garbo dadar ina Rayaala salal soo raacshay waxayna ahayd dabin aad fara kaga guban doontaan.
intood aqli iyo xigmad iska yara baadhan bal dhul u dhiciina yara hubsada.
Reply ↓	Ali-Durgiye	April 29, 2012 • 11:47	waliba ku darsada waxaa nila gudboon in aad kala doorataan idinko si toos ah Boorama oo 30km ni jirta ugu biira iyo in aad iska laba canlaysaan oo aad ka dhex kaluumaysataan ciise iyo gedabuursi niga hurda.
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 12:08	Ali Dhurkiye,
aado saylac dorasho ayaad ku soo baxden, anagaana ku soo dooranay oo is idhi dadkan aad shalayba u ogolaateen inay soo degaan, bal u yara xigta miisa ileen waa dad aan is dhalnee, ee sidaan kuugu lisay igumaad habeyn,
maantaba soo dhigo doorasho inaad soo baxdid iyo in kale…
Reply ↓	satawe44@hotmail.com	April 29, 2012 • 12:15	cali xaamud sadex wasiir ,sagaal wasiir, iyo sideed iyo
toban wasiir waxba uma oga cali waa asal , waa awlaadii saylac
waa indhihii saylac waa oday laftii.
HA KARAAMA SEEGINA HABAAR IYO CAY CALI LAGU KARI
Reply ↓	Ali-Durgiye	April 29, 2012 • 12:22	@Haboon Doorashba yaa kuu ogol hortaa? meesha wax walba waa calcule mental badhasaabka Awdal hadduu gedabuursi yahay kan salal waa ciise maayeer ku xikeenga Boorama haduu ciise noqdo kan saylacna waa gedabuursi tres simple hadaad qorshe cusub la timmaado cirkaad soo leefi mahadcasoow.
Reply ↓	ahmed	April 29, 2012 • 13:17	wasiir cali waa nin aad u karti badan, waana waqtigii la sixi lahaa khaladaadkii uu galay dhuuni qaate Riyaale, waa in loo quus gooyaa kuwan ciise baadiyaha ah ee damaca la galiyey. wayna soo dhawydahay waqtigii arinkaas la samayn lahaa.aad ayaan ula socdaa safarka wasiirka waanan arin aad u muhiim ah, kuwan Harawo ee xumaanta badan waxaan ku dhihi lahaa Wasiirku dhulkiisa cid uu isagu uu ka caydhiyo maahee cid isaga kula hadli kartaa ma jirto. odaygan buuriga cunka ah ee ciisena meesha wax uu ka yahay ayaa iska yar, markaa Harawo wax isku fala . waad marin habawdeene.
Reply ↓	satawe44@hotmail.com	April 29, 2012 • 13:33	cali durgiye horta nin aad u kaftan wanaagsan waliba ciise
dhaba waad tahay doodaaduna waa xalal mar walba waxaad
ka hadashaana waa wax jira magac iyo sharaf cida maanta saylac ku daaqaysa waa la
yaqaan degaan iyo asal cidii leh saylacna waa la
yaqaan maantana inaad muran galiso caro samaroon
maxaadcase, habar xuseen, wakhtigaa kuu saamaxay
waxaanse ku leeyahay WAA SAHAL DABAYSHUYE YAAN DAADKU KULA TAGIN.
Reply ↓	gudoon	April 29, 2012 • 14:21	cisahan salel sheganaya ayaan la yaaby ,, somalia ,, waa 18 gobol waxa salel la yiraahdo kuman arag,, saylac waa dagmo awdal hoos timaada ilaa boon ba la socdaa waw hada bisha 8 wixii ka danbeeya dowlad somaliyed oo 18 gobol ah waxan aheen kama shaqaynaysa wadanka ee edeb dadka ula noolada ban idin odhan lahaa waa ciisaha la hadlaya ,, calina awowgii baa saylac laha ka talin jiray cid u sheegan kartaana ma jito ,, lakiin waxan saylici u sheegi laha in taalo loo dhisi laha haduu ciisaha laad dabada kala dhaco ilaa jabuuti haduu chance haystaa wasiirkoodi siilaayo laad buu ilaa jabuuti u diray waxan sugnaba waa saylici iyo ougust ka hor wuxuu samaeeyo,, god bless awdalstate
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 14:56	Ina durkiyoo,
Horta sheekadii been ma noqotay ina xaamud baa dhuumasho ku soo galay, iyada halkaa ha ku dhaafno. Ee ciise iyo gadabursi inay wada hadlaan waad rabtaa, laakin ma ka soo bilaabaysaa jabuuti ?
Reply ↓	Fariid	April 29, 2012 • 15:32	markan aad ayaan ugu farxay in Samaroon dhexdiisa xabad joojin sameeyay. inaga aan isu dambayno marka hore xadadkeena waa in aynu sugnaa. aan ku celiyo wax Salal la dhaho ma jirto dhawr reer oo ciise abti loo yahay way deganyihiin xeebta lkn waa minority. bal yaa sheegi kara qof ciise ah oo soamali wada garanyso oo Saylac ka yimi ma jiraan. Ciisaha somaliya lagu arkay dhamaan waxay ahaayeen kuwo reer Baroma ah asal ahaana ka yimid Ethiopia.
markaa gudomiyaha Saylac waa in lagu badalaa Samaroonkii dhulka iska lahaa.
1977 Gadabuursigu Djibouti markii la qaybsanayay qalad weyn ayay galeen oo kuraasidii waxay wada siiyeen dad kale
maanta in aan tariikhdaa ku celinaa waa khalad. Riyaale aad ayuu u qaldamay markuu arinkaa faraha la galay. Ciise Djibouti oo ay qudhunsadeen ayaan ku ognahay.
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 16:03	Daganaatii nabadiyo
maxaa dumiyay ee dhaca…..ciisoow?
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 16:04	Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 16:07	ciise iyo samaroon ha ka soo bilaabaan xisaabta jabuuti…
Reply ↓	Marunbaa	April 29, 2012 • 16:14	Durkiyoow dhibtii somaliya wax laga xishoon jiray bay xalaalaysay, waxana soo baxay wax la yidhaa ku qabso ku qadi mayside. Dee adaaba runta og oo waadiga leh wax doorasho la yidhaa ma jiree wuxuba waa mental calculation. Xeryahii qaxootiga ee Laas dhuureh, Saba cad, iyo Daray macaanaba dib bay u noqdeene kuwii Biyo kulul maxaa maronka galiyey ee wadani ka dhigay Durkiyoow iyadba waa naslade. Bal marlay yurub na waad joogtaaye maad fanaaniintii ciisaha ee xeryahaas ka soo baxay waraysatid sida Xanxanteeye iyo Xasan wado ood tidhaahdid waar horta halkeen ka nimid. Ciise inta somaliya xadkeed soo gasha waala yaqaan waxay doorasho ku helaana cidi u diidi mayso balse mental calculation kaad sheegtay Djurkiyoow wuu dhamaaday. Dhib kastoo dhacda waala saxaa taasna waa wax la sixi doono. Gayaan laga fiirsado wax aan ahayn iguma lihid aado.
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 16:59	saxid :
isku duubnideeni (doonistii calanka jabuuti)
maxaa dumiyay ee dhacay
Reply ↓	Tallman	April 29, 2012 • 17:26	Aniga ilama wanaagsana in lanoogu sheekeeyo Salal ma jirto oo Rayaalaa magacaabey oo Awdal kaliyaa jirta,taas ma soconayso.Saaxil ba Cigaal(AU) ayaa magacaabey Sool Siad Barre(AU) ayaa magacaabey markaa Salal waa gobol 2aad oo majority ay yihiin Maxad Case,fara ku tiris weeyaan Mamaasanka soo raaca,ma sheegin wakhtiyadii ugu dambeeyey ee Daahir Diifle hadii uu Ciise ka keenay Lafaciise iyo Djibouti.
Reply ↓	Aisha	April 29, 2012 • 17:55	Gudoon afkaaga hayso markan ciisaan taageeraynaa mayaanad arkayn waxa hiildan kuhadlaayo dadkan waan kudaalee handayno waxba iskuma nihine
Reply ↓	gudoon	April 29, 2012 • 18:56	aisha huuno xabada xagaa ciisaha aan u jeedino kuwaan aan u hiilinayno waa samaroo saciid inder iyaga hiildan iyo qoladan waan isku danbayna marka cadow ina soo dhex galo aan mid ahaano marka kale dee wan is naqaana jy cidna u daahi mayso ee sidaa ula soco xabada waa kor ban u ridaynaa this time ok ,aisha an mid kugu daree awdalstate mar dhow wadanki way ka dhex toosaysa la soco ,, god bless awdalstate
Reply ↓	Ali-Durgiye	April 29, 2012 • 17:56	@marunbaa
saxiib sidaad kormee rag u tahay uunbad ka silbataa idhanka hadalka laga agloolo ee siday wax kaa yihiin? Maxaa Hassan wado iyo Abdirahman xalanteeyee keenay madasha——!!!! ragu waa ciise waxay ku kala dhasheen Boon iyo Xariirad hadana waxay si wada jir ah gacanta ugu hayaan mashruca lagu dhisayo dhakhtaarka magaalada Xariirad wuxuuna si toos ah u bilaami doona bisha June ee sanadkan ee adduu maxaad dadka iyo dalka ku tartaa marka laga reebo hinaase iyo xasadka beerka ku buuxshay.
Doorashadu waa calcule mental waxayna cidhibta ku haysa qabyaalad iyo mid walba degankii, adeerka saylicina wuxuu meesha ku yimid waa sidaa, midna waa kuugu cay iyo ceeb haddii aad salal leedahay martina ku tahay xoog iyo xeer waxaa lagaga haystana aad midna sheegi karayn.
Qaxooti hadaan u baxay taasi waa sune soo jireen ah oo nabi Mohamed(NNKH) wuxuu ka qaxay magaaladu ku dhashay wuxuuna ku soo noqday isagoo sharaf iyo cise leh xaga soomaalida dulmigii dalka ka jiray waxaa ka dhidhiyay raga Idoor ee aad maanta u shaqa tagtay waana dhiigoogi waaxad la cunto laakiin adiga ma la arkay adoo qoriga qaaday oo haba yaraatee muujin rabitaankaaga?
Reply ↓	Colhaye	April 29, 2012 • 18:10	Waar horta ayaa badan gadabursiga jabuti iyo ciisaha awdal ku nool taa marka la cadeeyo ayaa waxaa lo galayaa arimaha abood qaybsiga sida lo maamulay anigu mana garanayo mana qiyaasi garo cali durkiyana haku horeyo
Reply ↓	Mustafe	April 29, 2012 • 18:20	Iidoorkaad hambada la xuntaaye adiga wali hankaaga ma cadeysey? Afkaaga caano lagu qabey Cali-Durgiye.
Waar dadku han yaraa ma sadexdaas bay idiinku dhantahey. Bucul oo la rido, Saylac iyo Harawo websites oo la xidho. Saxedaas midna Saylici-Siiranyo iyo dowladaada ma hoostagaane waa xor.
Reply ↓	Colhaye	April 29, 2012 • 18:26	Cali durkiye waa difaac adag lamari maayo
Reply ↓	timacade	April 29, 2012 • 18:31	Ali durgiye………halkaa kaga wad tuujista reertolkay. Waxay u baahanyihiin iskuulo siyaasada lagu barto.samaroon sheegasho ma yaqaan ee wax loo garto ayuu yaqaan. Ma Waxad aragtay qof wixii gacanta ugu jiray ee u lahaa qof kale permission uga doonaya. Xidhiidhka samaroon iyo isaaq AMA Somaliland waa sidaa oo kale. Waxba yaan ciise lagula galgalan siyaasad xumada dhexdeena ka jirta. @Aisha…….hadalkaa dib ula noqo.
Reply ↓	Fariid	April 29, 2012 • 18:33	Aisha, markan xabada joojiya Ciise iyo Maxedcase aynu isu daawano.
Reply ↓	Ali-Durgiye	April 29, 2012 • 18:43	Colhaye,
mahadsanid saxiib waa kaftan raganimo ee meesha wax kale kuma haynoo,laakiin arrintaa Djibouti dib inuugu dhiga si ay meeshu is dhex yaac u noqon.
@Timacadde, samarron col iyo colaad midna uma haynoo ee ha naga dayaan huyucsiga oo si diiraan ha u furaan muraadkooga iyo waxay uurka ku hayaan.
Reply ↓	timacade	April 29, 2012 • 18:49	Ali durgiye…..samaroon inta fahansan waxay rabaani way yaryihiin, intaasina waxay u badanyihiin dadka soomaliweyn rumaysan sidaydoo kale…..kkkkkk faan.com
Reply ↓	Tallman	April 29, 2012 • 18:47	War anuu waxaan la yaabey waxa isku xidhey Reer Awdal oo Somaliland ah iyo arrintan Saylac!Abaarahii ka dhacey Galbeedka waxa aan dhagaysanayey Nin Ciise ah oo lahaa Hadaan nahay Ciisaha Dagan Somaliland waxa aan doonaynaa mucaawimada Raashinka in dhamaan la gaadhsiiyo dadka tabaalaysan ,markaa cid cid khasbaysaa ama kaba qaad u ah ma jirto.Kaftan waa halkiisa laakiin Majorityga Saylac waa Maxad Case dadkan Jibriil Yoonisna waa dad ducafo ah mar ay u heesaan Habaryoonis mar ay u heesaan Ciise mar ay tuugsadaan Ogaadeen,halkanna dood maaha BBC ama VOA ay u qabatey Nin Maxad Case ah iyo nin Samaroona,Hiildan uun baa dadka warm ka yara dhigey taasna waa ok laakiin Harowo State iyo dadkan tuugsada ee xafladaha ka niikiya waxba yaaney u niikin Ciise Maanta anaa u badan Salal iyo Awdal,2daba waan naqaan halkee buu Ciise majority ka yahay Somaliland,hadiise Ciise xitaa hal magaalo oo weyn ku badanyahay waxa ay ka noqon lahaayeen Somaliland President ama Vice President,laakiin ma jiraan,runtii aad bay ugu yaryihiin.
Reply ↓	Tallman	April 29, 2012 • 18:51	Correction:Nin Samaroona iyo nin Ciise ah maaha dood .
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 19:06	gudoon naga fadhiiso dhulka hiil kaagama baahnine, tallman hadaad ka hadhi weydo ilaa xertii aw daahir duufle ayaan isasoo daba yaacsiin….
Reply ↓	Ali-Durgiye	April 29, 2012 • 19:06	@Tallman,
dhulka awdal ciise iyo gedabuursi waxay labaduba uga diga rogteen Djibouti iyo Boorama dhulku waa sidii nabi Aadam calay salam lughaya sahal baan u dhaafay laakiin tuulooyinka ka dhisan waxaa ugu weyn Boon iyo Garbo dadar oo Daahir Ryaale dabin u mahacase u dhgay ahayd ayaad ka degtin
inta kale waa xariirad,Geerisa,Asha.cade,Ceel-gaal,saylac,toqoshi,iyo lowyacade dhamaan waxaa degi waa ciise tiraduu doonu ha ahaato tusaalana waxaa kuugu filan car soo sheega idinku hal maalin geeyay joonyad bariis ah!!!!!!!
4 cooshadood ee saylac ka dhisan eed ku faantaan kama duwanaa xaafadii isha Boorama ee Hargeysa ku ooli jirtay.
Reply ↓	HaniMuufo	April 29, 2012 • 19:09	Salaan sare asxaabta,
Articelki iigu dambeeye een wargays ku daabaco waxa u jeedadiisu ahayd Is afgaran waayga. Iyo aqoon oon laysu lahayn. Waxa ka dhici karo hadii labaan aqoon isu lahayn caws isla daaqa is tiraahdo kkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Reply ↓	Tallman	April 29, 2012 • 19:13	Mid kalana aan ku daro Djibouti oo dhan waxa ku nool 500,000 oo qof oo waliba half ay tahay Canfar,markaa hadiiba Ciisaha Djibouti aanu ka badnayn 250,000 oo qof oo Somali kalana la dagaan haba lagaga badnaadee inteebaa ka dagta Ciise Magaalada Zeila,common guys! Common sense.
Reply ↓	Fariid	April 29, 2012 • 19:15	Ceebla, xageed ka dhacday S/Land waa laga nastay imika
xagaa iyo xeebaha ayaa la isla aaday.
Reply ↓	Colhaye	April 29, 2012 • 19:18	Waar tallmanow jibril yonis waa lafta geela badhee haku mashquuline waana tole ee bal wakaase cali durkiye la dood o wax ka dhe mise lama hadli kartid
Reply ↓	gudoon	April 29, 2012 • 19:23	haboon adiga kuma hiilinayo adiga iyo aniga enemy baan nahay lakiin waxan ka sii necbahay ciisaha sidaa darteed ayaan adiga waranka kaaga weecinaya ee hiil maha mida kale adiga ma matashid maxadcase waa tolkay DNA baan wdangna markaa shekadena markale inoogu dhig, saylac baan soo dhacsanaya becouse ugaasaydii ingriis saanta kaga saxeexay waxay aheeyen MAKAAIL taasa i wada ok .god bless awdalstate
Reply ↓	ceebla	April 29, 2012 • 19:35	ciise iyo maxadcase way is dhaleen, dhul kala sheegashadana soomaali ayay uga siman yihiin. oo sideedaba soomali waxa ka soo hadhay anaa halkaa dega iyo mayee ana adega. markaa waa iska normal urgument, waxaasemuhiim ah maxaad hada ku darsatay horumarka ka socda dhulka la kala sheeganayo, maxaa dadkaa loo qabtay taas ayaa ugu fiicnaan lahayd in laga doodo.
fariid dee wixi qaran dumis ah uunban ka hadli.
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 19:42	ali,
Muxuu ka ciise ee xariirad ama geerisa ku dhasha uu u xaq badan yahay uugana muwaadin sanyahay ka kale jabuuti ku dhasha ee samaroon kaas oo loogu dari jiray xadhig iyo masaafuris waraaaqahana laga reeban jiray, amba loo odhan jiray adigu umaad dhan wadakee boorame u shaqo tag ?
Reply ↓	Hassan	April 29, 2012 • 19:46	Hani muufo… fiican cumar maa lagu dhahaa abaayo… waaba magac macaane……. ladaneey article ka aad soo dhigtay…
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 19:48	Gudoon
Adaa shalay m/case ka faanay ciiso isku macaaneeyee, hadaanad sidaa yeelina maanta laba calina kuma wada hadasheen hiilkaagu waa too late, makaahiil haday dagi jireen maxaa ka eryaday saylacse ?
Reply ↓	HaniMuufo	April 29, 2012 • 19:55	Iska daaya walalayaal jufo jufada aad isu bahdilaysan iyo nacaybka. Somalia have enouch love for both of us.Dhulkeena hodonka ah kama faiidaysano laakin waan is ku bahdilnaa. Waxaan nahay bahalka riibiga la yiraahdo. Somalidu waxay ku mahmahdaa ( Riibi geedo ma daaqo lagamana daaqo). Jufooyinka ku faanaya in aay dhulka leeyihiin. Isla iyagi ayaa ku dul macluulsan dhulki oo haraad iyo diifi ka muuqadaa. War dad yahow intaan dib isugu noqono. Wax umada faiido ugu jirto aan ka doodno. Goof aad adba ku dul mujaacaysantahay mid kale u diid waa wax aan mustaqbal iyo faiido toona lahayne. Hal xiraalaha Hiildan ee maanta waa Waamaxay riibi siduuse u egyahay?.
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 20:00	sahaloow,
wada hadalka, afarta cise ee wali dhukii jooga u daaya hadii wadahal ay samaroonka awdal dhex jooga la galayaan, laakiin samaroonka iyo ciisaha jabuuti iyo itoopiya jooga faraha han ka qaadno, wixii taakuleeyn ah way inagu leeyihiin…
Reply ↓	Tallman	April 29, 2012 • 20:03	Cali Durkiye waan ku salaamey sxb waxa aan kuu sheegayaa in aad tahay ”Minority in a Minority” oo macnaheehu yahay Minority ku hoos nool Minority yara badan.Hadda waxa aan shaqaynayaa”Over Time” ee waxa aan kaaga jawaabi doonaa su aalahaaga oo dhan,laakiin waxaan ka baqanayaa in ”Blood Pressure” aan kugurido.@HABOON BIG SALAAM.
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 20:07	hani
waxan waxaa keenay waa 20kii sano ee cid waliba bililiqo is tidhi, hadaan la wada hadalna oo boogaha hoos laga dhayin, sidaa iyo si ka daran ayaa lagu si jiraya,
samaroon ha iska bilaabo intaanu ciise wada hadal lagalin,
kadib ciise ha yidhaahdaan waar maxaa inoo dan ah…
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 20:10	waad salaaman tihiin dhamaantiin, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk horta aad baan u qoslay cali xaamud oo sadex iyo nus ku noqday saylac, mida kale anigu horaan u sheegay inaan ciise iyo mahad case la kala garan kkkkkk mee xertii haboon iyo hiildan horboodayeen ee na lahaa angaa goboka dhan ee awdal 80% ah may cali durkiye u jawaabaan intay samaroon iyo j/y ku meeeraysanayaan horta dhexdeena waanu joojinaynaa xafiiltankee ninkaa ciisee doobinaya ka soo baxa , midna aan ku daree hiildanoow harawo.com warka isagu iskamuu keenin ee waxuu ka soo xigtay wargeyska haatuf sidaad adiguba adoon war wadankii ka haynin aad websiteyada uga soo xigato markaa waxaan ku odhan lahaa yaanu tolkaa intaad si lee tahay ku xumee dhiigar kugu dhicine . ex rooble afdeeb
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 20:15	tani talman sidatana wax yar baan odhan lahaa adeer j/y intaad fuqu ku soo taagaysid horta dhulkagii u tasho markaa oo wax ka noqo markaa aniga igu so laabo si aan kuu daweeyo geedaan kuu qoriyekkkkkkkkkkk
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 20:20	cali durkiyoow kkkkkkkkkkkkkkkkkkk waad iga qoslisay walee qoladan tolkay ah ee m/case iska dhaaf inay waxay rabaan iyo waxay diidayaan ay adi ku shegtaane anaga oo tolkood ah ayay wax noo sheegan kari la ayihiin oo waa halki dumarkee hoostaa ka gunuunucayaan sidii guun garac laga dilay kkkkkkkkkkkkkk ee bal hadaaad awood aad kaga soo qufto lee tahay waxay rabaan ka soo saar sxb
Reply ↓	gudoon	April 29, 2012 • 20:34	jibril yonis iyagoon xilna hayn bay dhiig kar dad badan ku rideen what a power… dadkan xanuunsanaya ilaahi abuuray uun ba dwayn kara aan u ducayno aamin dhaha ,,, awdal waaaaaa dalkaygiii awdal waa dalkaygii,,god bless awdalstate of somalia
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 20:35	guleed ali iyo sahal waxaan odhan lahaa waa idhi, waan jeclaa inaan ka gun gaadho laakin ma fiicna in dad badan lagula wada hadlo, markaan fursad u helana isaga iyo sahalba way ii joogaan,
xabada xagiinaan imika u soo weecinayaa sababtoo ah fataalnimaad bilowdeen, ee aaway adiga iyo gudoon videogii aan idinka sugaayay ee iidoorka ugu hanjabayseen ?
Reply ↓	SAHAL	April 29, 2012 • 20:38	waryaadaheen sowtii doodkale inoo socotay een ana caawoo dhan reer abtigaa wax dhacsii islahaa kkkkkkkkkkk inikuna ma’ dhinacan kalaad Cali xuurto ku hayseen
caawase waxan fahmay Hiildan iyo H/X inay cida ddoda inaga qasaysaab yihiin ee kolba meel cusub inoo furaysa dee balwakaase dood cusub oo cay lahayn Hiildan intuu inoo furo aan warka is-deeqsiino.
Wasiir ku xigeen reer maxamed ahi haddu Saylac 3 wasiir iyo badh, HHUUUUUUUSHHH YAANU SIILAANYOO INI MAQLINEE, ku noqonayo de wali waad riyoonaysaan siddinii.
ninbaa yidhi qof Ciise ah oo lawada garanayo oo xeebta ka yimiday bal sheega , taasina waxay muujinaysaa aqoon xumada dhulka iyo dadka ka haysay de waa kuwee kuwa gadabuursi ee Geele Batal, Cumar caalin, Hassan Gouled, Cali gaab, Aw maa calaysh, General Subagleh, gen. Zakaria, badhasaab BUUNI .. iyo anoo sahal ah ka magac wayni kkkkkkkk
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 20:39	markay talo qalibtay dib u qoomameeyaan, quwadeey waxba ha tarin…
quwadiini ama awoodii aad ku faanayseen ee samaroon boorame uugu faanayseen aaway, hargaysa maad kalasoo baxdaan isaaqii ?
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 20:42	Guuleedoow gar ma aha ee waa gardarro in maxadcase iyo Ciise ay Awdal iyo Salal ku wada murmaan. Gartu waxay tahay inaan Jabuuti ku wada murano. Durgiye waxan u jawaabi doona marka an Jabuuti ka wada hadlayno.
@Guddoon, dee inaabti J/yoonis labaatan sano ka hor ayay dhiig kar nagu rideen. Imikaan kasoo bogsanaynaa, oo an boogahayagii dhayanaynaa . Dhulkay bixiyeenbaan dib usoo dhacsanaynaa, dhaqaalahay curyamiyeenbaan dib usoo dhisaynaa, dhismayaashay dumiyeenbaan dib usoo dhidbaynaa. Hadday sidaas uun nagu daayaan, horaybaan u durkaynaa.!
Reply ↓	SAHAL	April 29, 2012 • 20:49	Wali wax kastaba waad maqli Ceebla ma’ Ciise iyo Gadabuursibaa is-dhla mise Maxad case iyo Ciise kkkkkk oo Rayaale iyo Gudoona ma’ Maxad casaa sow Ciise ma dhalin mise magaca Makhahiil baa ka muquuranaysaa kkkkkkkk
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 20:53	sahal
ragan aad soo tirisay waa reer jabuuti. de markaa waa in jabuuti iyo somaliya loo wada hadlo sow arinku maaha oo wixii hore la soo faqo marka lays hor fadhiisanayo ?
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 21:01	hiildan marka hore aad baan kuu salaamay sxb horta dhulkan aad lee tahay waala bixiyey oo ina rayaala bixiyey siduu u bixiyey aniga aqligayga wey ka weynaatay dhulbaa la bxiyaa waan maqlay jago la bixiyo dhul la bixyo waligay oo waliba dadkii deganaa iyagoo indhahoogu shan yihiin la bixiyey aqli gal maahan oo waxan is weydiinayaa rayaale ma awood u dhul ku bixiyu ulaha mee dadkii dhulaka lahaa dadka la siiyey may xabad afka ka galiyaan hadayse dhacday ood idinku noqoteen dad aan itaal lahayn maxaad j/y kaga meeraysanaysaan, imkiyo haatan hadii uu saylici dhulki rayaale bixiyey waa sidaad hadalka u dhigteene uu soocelinayo waa raganimo oo hala arko hadii kale waxiinu waxay noqon af ka sheegasho iyo doqontii isha qudha lahayd ee taasina wallaalkeed ku eegaysy
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 21:10	Guuleed, Harowo yaad uga tagteen?; Awdalse yaad siiseen?
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 21:11	hiildanoow intaanad horta u boodin djabouti bal hora adiga iyo ciise ku kala baxa xeebta taas djabouti ha danbaysee aan kuarko adoo saylac wax ka noqday oo saylici taalo u ga dhisay magaceeda la yidhaa saylacdii daahir bixiyey soo celiyoow saylici waad naga farxisay oon aniguna xuso taas markaad la timaadaan ana wan xusi doonaa
Reply ↓	Aisha	April 29, 2012 • 21:11	dadkani waxay kalagaran waayeen cadaw iyo sadiiq waxay kala garan waayeen ciise iyo gadabuursi calooshay kabukaan markaa waana tiilayidhi cadawgaa cadawgii waa saaxiibkaa marhaday iskugu midyihiin shabakada harawo ninka qora iyo ninka saylac moyarka ka ihi oyna kalasaarayn nin dhaw iyo nin dheer dee anaga iyo ciisahana simida noolawada hadlayaan ama madfac qudha nagusoowada ridayaan dee cadawgaa cadawgii waa saaxiibkaaye ciise iyo j/y waa isku cadawmaanta
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 21:17	hiildan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk waxaan idin kula doodi kari waayey waa sidaa su aal ayaad su aal ka horkeenaysaan yaab kkkkkkkkkkk waar mida haro hay noo danbaysee ana akaaga jawaabi markeedee midan hada taagan ka jawaab , markaasay su aal ay ka jawaabi kari weydo ku meeraysataa su aal kale oo ah iga xidh waxba hay su aaline kkkkkkkkkkkkkk waar nimanyoow sidan isku dhaama oo waxaad diidaysaan iyo waxaad doonaysaan ha kala cadaato sidani si maahan waleeeeeeeeeee ee isku dhaama wa dadkiinaa dadka leh wanu ficiltamaynaa oo wada ficilbaanu nahay hadii aad su aal weydiisana ka jawaabi karayn oo ku marganaya dad dhana eeda saaraya
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 21:19	Aisha
Shabakada Harowo, iyo inta taageersani maxadcase iyo H/Cafaan waxay ka jecelyihiin Isaaq iyo Ciise.
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 21:21	aisha inadeer samaroon cadaw iskuma ehe dadbay wax ka qaldan yihiin sheegina karayn waxa ka qaldan ee ha ku fogaan waa tole nimankaa marna ay lee yihiin dhulkii abtiyaashayo ayaa noo sii haya marna ay anaga na mar marinyaan ha soo kala baxaane aaan yara dhaafno , hadeed ka fursan mayso inaan dheengad la dhacno oo ay dhulkooda wax ka noqdaan taas ka fursan maysee bal horta wax aan u sheegno waano waa lagala quustaye duul kane
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 21:22	guleed, wakhti badan ayaan u hadhay Saylici, waxba ha dagdagsan, ee adiga aaway videogii hanjabaadii hargaysa, idinka dadka u booteeye maas iska soo duubtan, waan kii isaaqi halkan maalin idinku hanjabay eed shibta gasheene,
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 21:24	waxaan danbi ahayn laga kororsan maayo waar ma umad dhan oo cabanaysa oo hadana waxay ku canabayaan marka su aaal laga weydiiyoo halkay kaaga jawaabi laahaayeen su aal kale ka ahor keenayaad aragtay yaabka yaabkii waa dadkaa dadka beel heblaayaan nahay ficil lanaguma gaadhada haya kkkkkkkkkkk
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 21:24	Guuleed,
Waxaanu diidayniyo, waxaanu doonayno dadyahow kala garta. Waxanu diidaynaa Labaatan sanadood oo an dulqaad degta ku sidnay Samaroon, in anagana maanta laba cisho naloo dul qaadan waayo, oo la na doca-doceeyo, oo kolba dhako cusub iyo heello cusub lannoo keeno. Waxanu doonaynaa dadkayagoo midooba iyo dantayada oo hagaagta.
Reply ↓	Aisha	April 29, 2012 • 21:30	hiidan taasi waacaloolxanuunka an kuusheegee reeraha iyo digaba inugu dhacay wuxuna ubaahan yahay geed MARDAF layidhaahdo wuxuna kabaxaa dhulkaad ka soo cidlayseen ilaa ad xoraysaana lamahelayo
Reply ↓	ceebla	April 29, 2012 • 21:33	sahal.
inaabti dee ciise iyo maxadcase waxan u idhi waxa weeyi dee waxa laga hadlayaa waa xeeb, xeebna makaahiilku ma degana ad uma hubo hadaanan khaldanayn. markaa hadaan idhi ciise iyo maxadcase ma ceeba, mise waxad rabtay mamaasan iyo maxadcase kk. inkasta oo aana hubin in mamaasan kali ahi la dego maxadacase.
si kastaba ha ahaatee kii dadka wax u qabta uunbaa dhulkana sheegan kara. waxan odhan lahaa qolyahan diaspora aha u kala badiya waxqabad anaguna kii saas yeela ayaanu u saxeexi. kii daka caawiya haraadka iyo abaaraha la ildaran. hooyooyinka ku umula doctor la’aan ee dhiig baxa u dhinta, caruurta haradku layay. kii kwaas wax u qabta ayaanu u saxeexin
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 21:34	Loooooool@Aisha, MARDAF waligay ma maqal, miyaa lays mariyaa mise waa la calashadaa, sidee loo isticmaalaa, harawaan usoo qaadiye
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 21:35	hiildanoow waa sax hadii labaatan sano aad dulqaad samayseen waan raganimo lakiin waxaad u dul qaatateen ee dhib ah ee laydinku hayay maxay ahayd cidase dhibka idinku haysay geed hoostii intood la fadhiisateen adeer dhibkaasaad nagu haysaane naga dhaafa ma tidhaahdeen ana isku jawaabay waa maya, maxaa markaa idiiin diiday inaad samaroon maahan m/case iyo j/y se maxaad cabashadiina aad ugu gudbin weydeen samaroonka kale si laydinka qabto ama maxaad u tusi weydeen inaad u dulqaadanaysan si ay u ogaadaan inaad wax badan u dul qaadateen ileen may tidhi baa meesha taalee ,
midan aad lee tahay waxaan rabnaa dadkayagoo midooba siday ku imanaysa midawgu saw inuu qofku dhibkii loogaystay dadka u gaysatay samaroonkoo wada maqlaya u sheegto ma ahayn si marka la gorfeyo haday cidaa kucataato yeeke looo saaro , ilamana ah inaad midaw ga daacad ka tihiin oo afka baarkiisa ayay inga tahay sabaabtoo ah waxaa aad lee tahay 20 sano ayaan qarsanayey dee imika waxaa kugu culus inaad geed hoostii ka tidhaahdaan
, hadii aad imikada ka tidhaahdaana dee nin waliba danbigiisa isagaa qoorta loo saariye soo dhaa dhaca
aan ahayn dee adeerhayna waalinee idina ha wareerinee isku dega oo bal wax idinka soconaya uun la yimaada
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 21:37	guleed
waxaan ujeedo waad iska fahmaysaaye, waad idha adaygaysaa,laakiin jawaabteena waan idinka sugayaa adiga iyo heblaayo..
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 21:39	Guuleed,
Dee maxaanu gar idiin dhiganaa, waxad nagu noqoteen carsaanyo an madax iyo mijo la qabto iyo meel loogu soo hagaaba an ka waynaye.? Sakan kasta iyo saacad kasta kolba si baad u socotiin..!
Reply ↓	Aisha	April 29, 2012 • 21:40	waa dawo calooshaa loo cabaa dadka caloolxanuunkoodu bogsan waayaa loo kariyaa wuxuu kabaxaa gubanka iyo dhulkaa ciisuhu qaatoo hadaan kuudooni lahaa dee xaalku wuu xumaanayaa oo qof xero jinsoo galaan noqon ilayn baasaboor lagu galikaraana majiroo ciise wali uma samaysane
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 21:40	mida kale hiil danoow dadka kala na garta kkkkkkkkkkkkkkk de waa iidoor oo beenta labaatanka sano waanu samraynay aad ku tidhaahdaan kkkkkkkkkkkkkk yeesha samir ilma labaatan samre iska dhaadhiciya iidoortana kkkkkkkkk waarna anigumardanban inila kaftamin wax idin weydiin kkkkkkkkkkkkkkk ku lahaa dadka kala na garta qosol badnaa
Reply ↓	HaniMuufo	April 29, 2012 • 21:41	Habooneey,
Cunuga noogu da da yar siduu hadalka u yiri ee Tallman la magacbaxay waxaa iga maajiyey siduu afare qabiilka u gu qalin jebshay kkkkkkkkkkkkk.
Idinkuna waad ku eegeysaan aduunka u qasayo.
Reply ↓	SAHAL	April 29, 2012 • 21:45	Waa runtaa lkn su’ aashu waxay ahayd, waa sidaan u fahmee ayaa Ciise magac leh oo dhulkaas xeebta ku dhashay ama ka yimid isa goo lugaynaya kkkkkkk Adiguse sow reer Djibouti ma’ tihid? Dhinac uun iskugu baydh inabti inaa wadan wax ku qaybsano iyo inaa reera sheegano, c’ est si facile.
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 21:49	Hani,
soms lekker voor hun, waayo cida cawa duqsiga ahayd waa loo jeeday, maar ik ook, ik hou niet die so groot mond heeft…
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 21:49	You see, waa sidaan sheegay waa carsaanyo..I REST MY CASE……., Guuleedbaa u markhaatiya, oo meel loogu soo hagaago an lahayn…kkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 21:49	haboon hiildan kkkkkkkkkkk dee inadeer gabadh miyan la doodi kara aduu gudoon meelahaa isku rifa tan ay kaaga dhegtay vedio soo gasha ma iidoor inaan uga habranayaad moodaysa walee inaan uga habranayn iyagaaba habro ah oo meelaha kolba qolfoof waa hore dhintay intay soo qaataan la hor yimaad camarada oo yidhaahda kana reer koofureed baa naga dilay waagi habtii , marka badheey intaas shaah iyo magac ku doono iyo furun aad shaaha ku dhuuqdo ok
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 21:54	sahal, maanad akhrin waxaan soo qoray, waxaan idhi dadka reer jabuuti iyo itoopiya ciise iyo samaroonka awdal jooga faraha ha uuga qaadno iyagay u taala, de ana waan ku jira, waliba markay dhul laga hadlaayo, anigu inta badan waad i aragtay marka m/case la caayo uun baan dhex badaasha ee dhul iskuma mashquuliyo…
Reply ↓	SAHAL	April 29, 2012 • 21:56	Ceeblaay,
Dhulka haddaad buur iyo banka hoose u kala saartay BOON iyo B/Cli xageed raacisay, mise Hiildankan Saylac iyo wax hal talaabo isku jira ka yara dhiga ayaad run mooday kkkkkkk
MIIM wuu isku soo baxayaaye lkn bal HC wahel u doo doon
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 21:57	hiildan kkkkkkkkkkkkkkk walaahi aniga iyo tolkay j/y ba waa leenahay meel la noogu soo hagago lakiin idiiinkaan lahayn oo kolba qar isku qaaday sheegan karanayn waxa laabtiina ama calooshiina ku jira , somalidu waxay tidhaaa calooosha waxii ku jira ayan indhuhu qabanayn lakiin afka waxaad ka lee tihiin waaa wax wanaagsan uurkiiiniyo afka waxaad ka lee dihiin isma laha
imikana maca salaama intaas hay noo jpoogto waa inoo totobaadka soo socda iyo idinkoo ciise soo kala baxay ex rooble afdeeb
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 22:02	SAHAL,
Caawa ma saamalaylbaad tahay, mise kooraankiibaa idnku go’ay?…!
Reply ↓	guuleed	April 29, 2012 • 22:02	insha alaah
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 22:05	guleed, dee adaa hiildan iyo haboon isku soo daray, ee maad markii hore nakala saartid, isaga ku eekaatid, maxaase caawa idinka duqsi idinka dhigay,
Reply ↓	SAHAL	April 29, 2012 • 22:07	Hiildan,
Haddaan u soo noqdo su’ aasha aad ciwaanka uga dhigtay qoraalkaaga ” car yaa la hadli kara ina xaamud”. Jawaabtu waa cidba dee bal adigu hel sida loola hadlo nin marti ah oo waliba dhuumanaya kkkkkkkkkkkk
Adiguse iyaad isku halaynaysa oo aad isleedahay yar kan Buuni meesha way kaaga qaadi, haddiise laga qaado dee kolay Ciise kale uun baa meesha laguu dhigiye maxaad yeeli? Haddad leedahay Ciisana Boorame badhasaab ha ka noqdo dee Gadabuursina ha soo kaluun iyo cusbo doonto, anigu kolay taas diidi maayo, cali iyo Ciise kalena sidaas kolay dhibsan maayaan.
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 22:12	SAHAL,
Horta wiilasha ciise ee dhulka jooga waa ciyaalkii xaafadda sida Buuni, Sugaal, iwm. Oo waxay hayaanba anaga uunbay noo hayaan meelna naga gayn maayaan. Balse arrinta SALAL waanu ka fiirsanynaa, inaan gobolkaas magaciisaba tirtirno, iyo inuu noqdo mid cidda an rabno ee ku munaasabka ee an ku aamini karno loo dhiibo.
Su’aasha an kor ku xusay runtii ma khusayn reer Saylac, waxanse u dan lahaa shabakadahan Cali Xaamud ka dhigtay mehereda gaarka ee moodaya wiil yar oo madhan.
Reply ↓	SAHAL	April 29, 2012 • 22:15	Hiildan ,
Waar bahalku baryahan ma’ go inta badan ee anaa yaab awgii seexan waxaan Gadabuursi ka siino badan dhanaan iyo meeshan kulul, na soo weydaarta aan Boorame ku raaxaysano haddan nidhaahdana dee warba la inuugu iman maayo kkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Haboon	April 29, 2012 • 22:16	hani, ik hou niet van die so grote mond heeft…
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 22:22	SAHAL Waxba isla waayi maynee, baduhu way badan yihiine, baddiinu haydin deeqdo, anagana taayadu wayna deeqi. Beldkuna wuu weynyahay oo xagaa bax iyo jiilaal baxba wuu inagu wada filanyahay.
Reply ↓	SAHAL	April 29, 2012 • 22:27	Hiildan raali ahow haddaa, dirbaax ciddad doonto een Ciise ahayn waa markaagiiye kkkkkkkkk
Inttan isku haynaaba waa intaa kkkkkkkkkk ciyaalkii xaafada uun baa xaafadoodii ka talinaya meelna Gadabuursi wax ka gayn maayaan ee soo dhawaada abti oo fiirsashada iyo dhaka faarkaba iska daaya oo dadku waa dadkaad dhasheena nabad ku dhex mushaaxa.
Reply ↓	SAHAL	April 29, 2012 • 22:33	Hiildanoow
wax kaliba ha joogaane ma’ BOON baa BADLAAD odhan?
Horta dabaasha ma’ taqaanaa, haddaad taqaaanidse xaggeed ku baratay?
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 22:33	Waa sax SAHAL, anagu waxba uma fiirsanee, reer carsaanyo ah uunbaa kolba dhinac noo hor ordaya. markaasaan anaguna kolba meeshay nala galaan ka daba galaynaa. Maalin ciisay noola galaan, maalin Isaaqbay noola galaan, maalin xabashibay noola galaan, maalina xamarbay noola galaan. Anaguna intaa waan daba ordaynaa uun oo soo joogsada, soo jeesta ayaan leenahay, illeyn ninka weynbuu waraabe cunaaye..kkkkkkkkk
Reply ↓	hiildan	April 29, 2012 • 22:35	Haa saaxiib Boon baddeedu waa Saylac. Buurta Libaaxlay intoon is dul taagno ayaan calaa madax badda saylac ugu boodnaa. Waxba isuma jiraan.
Reply ↓	gudoon	April 29, 2012 • 23:09	hiildan reerka aad ku dabo daashay waa ayo ,,
Reply ↓	diiriye	April 29, 2012 • 23:46	HANIMUUFO
waan ku salaamay abaayo waxaan akhristay maqaalkaagii aad soo dhigtay ladaneey mag.
saw weligaa lagu maad aragay meelo xoolo joogaan iyo miyiba waxaad tidhi gabadho waxay haysatay 100 riyood oo isugu jira orgi iyo naylo ………………yaab.com
xagee lagu arkay riyo naylo dhala .naylaha waxa dhala idaha riyuhuna orgi ama waxaro.
Reply ↓	HaniMuufo	April 30, 2012 • 04:14	Gudooneey,
J/Yoonis iyo Reer Nuur aa laga wada saan filayo.
Deze Jongen hij is brutaal, vandaag is koninginnedag ga je naar de stad. Ik hoop dat het mooie weer is.
Reply ↓	Marunbaa	April 30, 2012 • 05:31	Durkiyooow qaxooti baad u baxday oo waad ka soo noqotay kama wadee, inta xereen soo sheegayba somalida Ethiopia ka timid baa ku noolayd balse aduu waxaad jac ku dhigtay, kaar kii qaxootiga intaad tuurtay uun baad wadani laabta iska tumaya noqotay. Waa taas ta adiga iyo clswslm Rasuulkii idiin dhaxaysaa.Biyo kulul wadani aan la marayn baa ka dilaacay. Mamaasan Baraxaan farabadanaa waa yaabe. Calaw intaa kuu dhaafi maayo waalagugu batoo inaad silbataan ka baqaaye. Timacade miyaanad horseed u ahayn fikirka Samaroon ee doolaalo halawgu qaatay markaad Hiilqaran hubka u qaaday halka cidhbaha layska cunayo?
Reply ↓	Marunbaa	April 30, 2012 • 05:32	Badaraxaan baan ka wadaa
Reply ↓	Aisha	April 30, 2012 • 08:54	hiildan maantuunbuu runtii afku kaa xaday marhadaad tidhi reerkan j/y ayuunbaa kolba dhinac noowada micnihii waa ROLEMODEL kayagii dee maad sidaa marhoreba uhadashiin waan isku noqon lahaynoo talaabo kasta oon qaadayno xagadanbaaan eegi lahayn si aan ulasocono inaad dariiqa haysataan iyo inaad naga lunteene
midna ankuugudaree adiga harawo uunbay kaaga dhegtaye ma ogtahay in reerka dhamaantiiba dabkii kabakhtiyay oo sadexdii dhadhaar ee looqaybiyey inkaar ku noqotay ilayn dhadhaarku wuxu faa iido leeyahay marka dab ku shidanyahay oo waxbaad ku karsan ama waad kulaali laakiin haduu danbas qaboobi dhex yaal faa iido malaha. markaa waxan kuu sheegayaa umadii jaarkeenu way midaysan yihiin meelwalbana way kaaga horeeyaan intaad harawo.com war ay sheegtay dhaafi laadahay.
Reply ↓	HaniMuufo	April 30, 2012 • 09:53	Diriye kkkkkkkkkkkk,
Reer magaal gaboobay ayaan ahay waligey ari dhalayona ma arag fantasy ayaan iska qoray anoo greaving ah islehna umada wax fahansii kkkkkkkkk.
Laakin dad badan ayaa ila soo xiriiray oo ii sheegay nayl iyo waxar waxay kala yihiin kkkkkkkkkkk. Hadaan wagaa ceeblo aqaan iyadaan ka waraysan lahaa waxa aay kala yihiin. Lakin intii aqrisay ee asxaabtayda ahayd wax qalada kama arag oo iyaguba cimrigooda geel dhalayo ma arag ama ari toona.
Reply ↓	Haboon	April 30, 2012 • 09:55	HANI,
Anigu dadka stadka jecel ma ihi, tuulo ayaan deganahay, halkana ka gezellig en rustig badan stadka, anagaaba guriga nalagu xidhiidhiyaa markay magalada stress ka soo qadaan, 3dan week na madax xanuunin, adiga xagaaga ma usoo caraaraa, dhari karis ayaan ka dalaalee, 4taadii oo 4 kale iyo hooyadood kuugu biiri maxaad u maleeyn,
Reply ↓	HaniMuufo	April 30, 2012 • 10:39	Kkkkkkkkk Habooneey Anuu kuwaygi inan tuulo joogto ayaan u geeye. Ana magaalkaan geli oo in aan bogorada u dabaaldegaan dooni caawa.
Labadaan dhalay iyo xayn kale oo ina aderteey dhashay ayaan suuqii romelmarkt ka u goglay oon iri bal bugaagti iyo alabadaad ka waynateen halkan ku iibiya. Saambuusena xaloo dhan baan xidhxidhaye ani iyo ina adeerteey. Deeto iibi uun baan ku iri. Dhajku wuu jecelyahay saambuusaha. Aduu bal isku day in aad tuuladaad joogto saambuse u dhadhansiiso dadka albabkaaga ka dhaqaaqi mayaan kkkkkk.
Reply ↓	SAHAL	April 30, 2012 • 10:54	Marunbaa, Laas-dhuura aaad sheegi, waa haddaan mid kaan aqaano sheegaysid , Ciisuhu miyayna ahayn kuwii qaxootiga caanaha ka iibin jirey ee geeli buurta ciinka hoosteeda u daaqi jirey mise abti Cali baa yara waasanaysaa kkkkkkkkkkkkkkkkkkk dhul aanad kala aqoon haddaad ka waran is-tidhaahdid ma fududa.
Hiildan waa runta bada Boon waa Saylac ee waxba Libaaxlay ka soo boodine soo dhawoow u dhulka iska soo musheex sahay la’ aan, gacal ciisoo ku bariiyana waayi maysid.
Reply ↓	Haboon	April 30, 2012 • 10:55	hani,
sowdiga leh kuwaygii inan tuulo gasha ayaan u geeyay, maxay tahay labada kale aad dhashay ee hadana suuqa aad fadhiisisay… yaab.
saanbuuse waan ka dhargiyay iyo baajiye basbasna waan u qasaa, xataa markay caruurta kale tuulada ilmo yar jaariq yahay ilmaha marku u tagaayo waxooga uugu sii dhiiba, hada baajiya ii qasan, aniga maanta lugaha la iga xhiday, jikadaan taaganahay, gabadha martida ah way ila yaaban tahay kute waxan aad qori iyo qosolkan maxay tahay, shiki ayaaba galay, waxay isleedahay naagta meeshan may ku shukaansanaysaa…
Reply ↓	SAHAL	April 30, 2012 • 10:57	FG. halmaan haddal kuma jiro klamada cayda u dhigan waxan uga jeeday “YARA WAABSANAYSAA” ee raali ha la iga noqdo dhamaan.
Reply ↓	Haboon	April 30, 2012 • 11:02	sahal, kaa noqon maynee xaal soo bixi, hadii kale yar yar kaan ciise martida ii ah ayaan ka jarayaa…
Reply ↓	Haboon	April 30, 2012 • 11:14	hani, insha alaalh inoo mar kale,
sahal caruurta ciise edo ayaan u ahee waxba ha u cabsoon anaa kaa jecel kaftan…
Reply ↓	HaniMuufo	April 30, 2012 • 11:28	Habooneey
Waxaan ula jedaa Magaalada tuulada ah ayaan ugu camiray romalmarkt. Saakay kolkaan geeye xaafadi ina aderteey.
Reply ↓	Tallman	April 30, 2012 • 12:05	Cali Durkiye,waxa la yaab ah in qofku uu sameysto taariikh been ah, magaalooyinka aad soo tirisey waxa ugu weyn Zeila iyo Lughaya oo xadka saaran inta kale waa tuulooyin dhamaanna aniga oo Maxad Case ah ayaa degan1.Xariirad waxa degan Maxad Case, waxa kale oo Maxad Case uu deganyahay Geerisa, Ashacadde,Ceelgaal,Zeila,Toqoshi iyo Lawyacaddo oo xadka Djibouti u dhaw, because Lawyacaddo waxa ay u dhawdahay Djibouti macnaheedu maaha in aad deegaan u leedihiin laakiin intaas oo tuulo waa laga helayaa mamaasan ku dhashey sida Xasan Guuleed Ilaahey ha u naxariistee ama Inan la yaal.Intaas waxa kuu sii dheer in Zeila ay ku taalo 5shirkadood waxayna kala yihiin
5.Africa On Line, dhamaantoodna waxa CEO ka ah 5 nin oo Maxad Case ah waxana ku jira adeerkay ruma oo ka soo guuray magaalada San Jose, California oo 80% Share ku leh, laakiin wey jiraan niman Ciise ah oo ka xamaasha ama ka shaqeysta.Geesisada aad sheegsheegtana waxa mar kasta shaqaaqooyin ka sameeya inamo teenage ah oo maxad Case ah oo doona in inta ay adhiga buuraha dhaadheer daaqaya ay dhacaan ay ka iibiyaan uun reero kale oo maxad Case ah, kuwaasna hadda hawl baan ka qabanay oo waa ay xidhanyihiin.Dhulkaascali Durkiyoow ma degana Ciise waayao anaa ku xidhan oo qaraabao iga jooagaan,laakiinse Ciise fara aku tirisa oo daqsin u timaada Banka gariyaad ee oomanaha ah waa loo ogolyahay oo waa dad somaaliyeed.
Reply ↓	Tallman	April 30, 2012 • 12:15	Waxa soo hadhey kuwan Jibriil Yoonis ee aan u bixiyey “Habaryoonis kaba u qaad” ee ka niikiya halls ku yaala qurbaha bal idinkana aan kala baxne maantee halkee baad ka degtaan Gobolka Awdal iyo Salal , waa run oo waad tihiin Gadaguursi, laakiin samaroon waa qabiil weyn ilaaheyna reer kasta dhul gaara ayuu ku abuuray, tusaale ahaan Reer Geedi oo Ciise ah Djibouti shaqo kuma laha waxa aad ka helaysaa Diredawa iyo zone Shiniile iyo gudaha Ethiopia, yaase aad ku sheegtaan Kaba qaad Isaaq!Yeswaxa aad uga jeedaan Maxad Case , laakiin waxa aad doonaysaan in aad u nacamalaysaan Isaaq oo aad soo durugtaan Ileen xitaa Ethiopia waxba kama tihidine.Xitaa Kilika 5aad tolkay Jibriil yoonis waxba kama aha, waxa ii cadeaayn ama Fact ah madaxweynaha Kililka 5aad waa in uu noqdaa markasta Ogaden, madaxweyne ku xigeenkuna waa in uu noqdaa Ciise, Isaaqa ayaa 1mar qabtay nin la yidhaa Ciid oo 34jir ah walaalkiina halkan aan joogo jooga, bal Jibriil Yoonisoow sheega sababta idinkoo kaga badan Isaaq Ethiopia ay iyagu xitaa u noqdeen mar madaxweynaha Kililka Ethiopia, marna u heleen ku xigeen idinkana ilaa iyo hadda aydaan waxba ka aheyn!!!, Jawaab baan idinka sugayaa!!!
Reply ↓	Tallman	April 30, 2012 • 12:28	Aynu ka hadalo Yaa badan dadka Awdal Degan ee samaroon iyo dadka degan Djibouti Republique! Hadda waxa aynu ka hadlaynaa Demography cali Durkiyoow.hadaba marka aad gasho websiteka “CIA Factbook” waxa uu sheegayaa in Djibouti oo dhan ay degaan 700,000 noo qof Awdal oo kaliyana ay ku noolyihiin 450,000 oo qof! Hadaba Awdal waa wada samaroon hadii aan la is nasakheyn saaxiib, laakiin Djibouti 700,000 ee qof waxa aan ka goynayaa half ah canfar oo kula degan oo marna ku weerarta hadana dhul kaa haysata , waxaan u jeedaa dhinaca Eretria oo xitaa Ciidaanakaagii qaqabatay, hadaba hadii aan u kala qaybiyo 2qaybood Soomaalaida Djibouti oo dabcan Ciise u badanyahay sinaba ugama badnaanayaan 350,000 oo qof ama slightly bay ka badaan karaan canfarta ileen Gadaguursi baad ku darsanaysaa iyo Somalai kale oo deganba haba noqdaan minority eh, markaa aan kaftan run u dhaw ku hadalnee maanan xagga Landmasska iyo Population Maska kaa badanayan sxb bal intaana homework degdega u soo qaado cali Durkiye. adoo aan caadifad aaney ku qaadin.Xaafadan aad leedahay “Isha Borame” ayaa la yidhaa oo samaraoon baa degana waaba ii faan oo waaba dad ii batey runtii sxb.
Reply ↓	Darbi Samaroon	April 30, 2012 • 14:11	Wasiir Cali Xaamud Djibriir waxa uu dhigmaa 4 wasiir halyay mar hadii uu maanta ka dhex toosay Ciise Waraabe oo Buuni Ilkoole xagaa iyo Djabouti hurdadu la tagtay oo isagoo Khuurinaaya Balbala ayuu Cali Titirfasho ku tagay ilayn waa la is ogyahay,Ciise Waraabe wax ka hurdo badan oo ka dabeeqad xun ma jirto,Isla marka uu hurdada ka kaco wuu ku sanifayaa oo isagoo qaraxsan oo qiiqaaya ayuu baraarugaa markaasay yidhaahdaan ke anaa islaantii Tallman aar ii qabta waxa taga xun leh,kkkk Cali Xaamud waxuu ogaa in Buuni Ilkole hurdo Jago Buldhuq oo aanusoo kacaynin ilaa inta uu dantiisa ka dhamaysanaayo waan ogahay Cali Xaamud waxuu isku xidhayay fiilooyinka doorashada golaha deegaanka ee soo socota oo noqon doonta mid indhaha u furidoonta Ciise Waraabe oo lagaga badin doono 6 iyo 0 waanan ku hambalyaynayaa wasiir Cali waliba waa inuu xidho Buuni Ilkoole oo saxaafada la hadlay isagoo khuurinaaya markii lala shiray dawladii hoose iyo dhamaan dadkii masuuliyiinta ka ahaa Zeiylac ayuu yidhi cidna maan arag waiirka waan maqlay.
Ciise Waraabe oo vampires ah oo mar marka qaarkood isku badala Waraabe fool xun ayaan ana la baryayaa Dir-nimo ayagoo banii aadantinimadii ka cararaya oo xayawaab isku badalaya markay cadhoodaan Dir-nimooy xaal qado,Adeer Somaliweyn baan doonayaa oo aan taageeraa iyo wax Salal la yidhaa ayaan ku doodi isma qabato ee hadaanad Dir ahayn dhulkuuma hayo anuu tageero dambe oo aan ku taageerona waa habeenkii xalay oo tagay ee Djabouti ha iisoo dhaafin sxb dhulkan waa dhul Direed cid aan Dir ahayn noomasoo gali karto Banii Axmed dhulweydiiso sxb Awdal weeyaan dhulkan yarkana Buuni Ilkoole waan u dhiibanay sidii Dahir Ryale ay Isaaq madax uga dhigteen si ay uga badbaadan dagal sokeeye oo dhexdooda ah ayaan Buuni Ilkoole ugu dhibanay Zeiylac si aan Samaroon dhexdiisa isku dilin ee maanta indhahaaga oo shan ah ayaad raki Samaroon oo soo ceshaday madax ilaa mijo Zieylac iyo xeeb dhamaanteed adiguna xagaa iyo Fransiiska Djabouti soo dhaafi maysid.
Allahayoow maxuu Faranjigani Naca Fariideeyay waaryaahee ma adaa Somalinimo maanta sheegankara adigoo adeerkaa Ismail Omer Guelleh karaani u yahay Males Zenaawi oo ilaa Xayle Zelase hoosta gashan jiray aniga maxaad iigu diidi Ethiopian-nimo iyo in aan la yeesho cilaaqaad wanaagsan DDS….? Abtiyaal Ciisa Waraaboow dhabada cagta saara.
Waxaad is leedahay is difaac hadana xusulada ayaad ku ordaysaa halkan labo nin oo walaalaheen Ciise madoobe ah ayaa kula hadlay inkasta oo ay diideen Dir-nimada hadana waa walaaheen oo waa Buro sanka inaga baxday weeyaan xanuuna uma goyn karno foolxumana uma sidan karno waana Sahal iyo Cali Cute ragan waa vampires oo haday geed is marin doonaan oo ay isku badali Waraabe ana Dir baan la baryayaa wali uma haysid jawaab waafiya oo qancisa ragan jawaabtooduna maaha maqaal dheer oo cadho iyo xanaaq ku qorto oo aad keyboard-ka dhareer iyo matag la duljoogsato.
Anaa kuu sheegi jawaabta Cali Cute iyo Sahal waa basiid sxb,Somalidu waxay taqaan oo ay ku wada hadashaa maanta iyo sabankan waa Luqada rasaasta iyo qiiqa baaruuda taasi kaliya ayaa idin kala saari karta hadii ay reer Djabouti diidaan wada noolaanshaha iyo Dir-nimada,Lkn hadaad maanta dhan caytanto oo aad tidhaa kuwan vampire-ka ah Zeiylac anigaa leh kaa aqbali maayaan ilaa sidan yeesho.
Reply ↓	Marunbaa	April 30, 2012 • 16:08	Sahaloow yayna waysadu kaa jabin, laas dhuurahaan ka hadlayaa waa hargaysa waqooyigeeda iska daa ciise geel ku eegee islaantii meela haas lagu arko xitaa magaceeda looguma yeedho ee Ciisay baa loo bixiyaa. Waxan ka waday oo kaliya, dadkii deganaa xeryahaan soo tiriyey dib bay u noqdeen dhulkay ka miyaadeen bayku noqdeene kii biyo kulul maxaa wadani waalan ka dhigay.Ciise somaliya dagani wuu jiraaye is beekhaaminta cali baan ka yaabay laakiin waa iska caadi oo waa tii gacalku isku dacaayadayn jiray, Ciisa madoobe hashiisa iyo hasha ninka kaluu wada tirsadaa. Dhul lagu qaldamana dee maba lihin oo buurta ilaa Lawgu waaba 50km
Reply ↓	Marunbaa	April 30, 2012 • 16:24	Loooool, Sahal, Hiildaan baad dabaal ma taqaan leedahay miyaa. Waad iga qoslisay. Hildaan inuu reer djibouti ahaa ma hubo laakiin waxan kuu ogahay, nin reer xeebeeda ama dhagax jooga oo bad xitaa cagta galiyaa ma jiro. Hadii adoo dabaalanaya lagu arkana waa lagu takoori jiray. Waxan tagay bari anoo yar laghay wixii nagu dhacayna anaa ogaa. Waxan ku siganay in nala quraan saaro iska daa dabaal ay bad u tagaane. Marlay hada way is badashay oo waxan maqlayba in ay xitaa kaluun cunaan.
Reply ↓	Darbi Samaroon	April 30, 2012 • 17:24	Maanta sheeko naxdin leh akhriyay waana dhibaatada Somalida ka haysata qurbaha siiba wadanada Yurub, Lamaanaha is qaba iyo caruurtooda iyo waxyaabaha ay kala kulmaan wadamada aynay hore u dhaqan aqoon.
Roble nin la yidhaa oo Somali ah iyo waxii uu kala kulmay Sweden markii uu ka helay maganyo.
Sheekada waxaa la yidhaa nin Gumoobay.
Juun, juun, juun. Qofka bisha juun Iswiidhan soo galaa wuxuu moodayaa janno. Kaymuhu cagaaranaa! Dhirtu dhaadheeraa oo qurxoonaa! Dhulku doog iyo ubax badanaa! Maxaa balli iyo haro galac leh! Maxaa tog iyo webi meel walba qulqulaya! Magaaladu nadiifsanaa oo degganaa.
Labaatanka bisha juun oo ay qorraxdu diirran tahay ayuu Rooble soo galay Iswiidhan. Wuxuu dalandalinayey qoyskiisa oo ka kooban xaaska Hodan iyo laba ilmood, Ismahaan oo lix jir ah iyo Axmed oo afar jir ah. Waa afartan jir miyi ku barbaaray tobankii sano ee u dambeeyeyna ahaa askari bilays ah. Riyadiisa ugu fog uguna weyni waxay ahayd mar uun in uu reerkiisa nolol ku filan u helo, mar uun in uu gaadho heer uusan cuntadooda, arradbeelkooda iyo hoygooda ka welwelin. Riyadiisa kale ee muhiimka ahi waa in uusan mijintiisa qaadka ah iyo sigaarka waayin. Toddobadii sano ee uu reerka lahaa arrimahaas wuxuu ku helayey silic iyo saxariir.
Maalintii uu naftiisa iyo reerkiisaba Iswiidhan u dhiibay iyo maalintii la siiyey sharcigii degganaanshaha waxaa u dhexeeyey oo keliya saddex toddobaad. Waxaa loogu daray aqal cammiran oo afar qol ka kooban. Haddii bil walba la siinayo lacag tii askarinnimada kumannaan goor ka badan dhib kuma aha isaga iyo xaasku in ay sidii laba ilmood aroor walba boorso dhabarka saartaan oo dugsi afka dalka lagu barto u jarmaadaan. Lacagta caydha loo yaqaan oo ay dadka dalka u dhashay ceeb laga xishoodo u arkaan reer Rooble mushahar ugama duwana. Lacagi sow lacag uun ma aha? Waxa loo dhididaa sow in lacag la helo uun ma aha? Aqalka uu dhex fadhiyo iyo waxa dhex yaal ee telefeeshin, armaajo, qaboojiye, fadhi debecsan, sariiro ka sii debecsan, iyo alaab kale oo badan haddii uu Soomaaliya joogo weligii ma heleen. Wuxuu xasuusan yahay aqalkii jiingadda ahaa ee uu sannadihii dambe ku noolaa, kaas oo xilliga kulaylka foorno noqon jray marka roob da’ayana la moodi jiray in madaafiic lagu duqaynayo.
Bilawgii ayey arrintu sidaas ahayd, hayeeshee xaalku wuxuu xumaaday markii uu Rooble cid shaqo u dirataba waayey. Markii uu afka wax ka bartay wuxuu ku dadaalay in uu shaqo helo, laakiin wax guul ah kama gaadhin. Berigii uu Soomaaliya joogay wuxuu maqli jiray ”carabta waxaa laga helaa shaqo askarinimo ah”, markii uu bilayska Iswiidhan shaqo noocaas ah u doontayna waaba lagu qoslay. Boqollaal kale oo soomaali ah oo aan subax kallihin ayuu bartay, dabadeed niyaddii shaqo raadintu waxay ku shiiqday eber. Biilkiina habartii bixin jirtay waxay bilawday bahdilid. In uu xafiis hebel warqad ka keeno, sababta uu shaqo u waayey, waxa uu muddadii la oo dhaafay qabtay iyo hadaltiro la mid ah ayey marka uu masruufka u doonto kala hor timid. Qalbijab iyo niyadxumo ayaa dhan walba ka soo weeraray.
Waxa uu reerku bisha helo saddex inood oo la isla yaqaan ayaa loo qaybiyaa: in lagu noolaado, in la xawilo, iyo in uu odaygu qaadka iyo sigaarka iskaga bixiyo. Waxii aan intaas ahayn ee faro dhexdood ka baxa muran badan baa ka dhasha, eeddana waxaa yeesha qaadka ama dharka dumarka. Qaadka halkan yaal qaad uun ma aha ee waa qaali aan weliba laga haqab la’ayn. Waxaa ka sii daran in uu mamnuuc yahay oo lala dhuunto. Si kasta ha ahaatee Rooble noloshii uu ku riyoon jiray tani kama foga. Laakiin adduun hawli kama dhammaato, marka hir la gaadhaba mid kale ayaa hira. Dhaqammada iyo diimahan cusub ee uu ku dhex nool yahay wuu ku diiqadoodaa, mustaqbalkana wuu ka baqaa. Wanaagsanaa qof nabaddan iyo noloshan dalkiisa ku helay. Wuxuu xasuustay heestii geela ee ahayd:
Sabtida iyo axadda carruurta wuxuu geeyaa malcaamad, yartiisana markii ay toddoba jir gaadhay ayuu xijaab kurka ugu daboolay. Isaguna wuxuu bilaabay salaad aan cabsi Eebbe ahayn ee cabsida dunida ah. Haddii uu Alle ka cabsanayo wuxuu iska dayn lahaa qabyaaladda, xanta, xasadka iyo qaadka. Xaaska wuxuu ku dirqiyey in ay tukato oo xijaabato ka dib markii uu arkay ama maqlay naago dabagaab qaatay oo gaambiyaan iyo caddaan gacanta qabsaday. Intaas ayuu qoyskiisa beloxijaab uga dhigay. Dunida wuxuu ugu neceb yahay naagaha ay Hodan telefoonka kula sheekaysato marna booqato ama iyagu soo booqda. Xataa waxaa ku jira kuwo caddaan ah. In kasta oo uu jecel yahay in ay guriga fadhido, haddana aad ayuu u neceb yahay telefeeshinka iyo waxa daran ee ay ka daawato sida Glamour, Dallas, Rideriet iyo waxa la midka ah.
Rooble ma oga in uusan isku heli karin xaaska in uu guriga ku hayo iyo in ay ahaato qalanjadii dhuubnayd. Waa taas jeer la egaatay ka dib markii ay nolosheeda ku koobtay kijada, telefeeshinka iyo sariirta. Isla markaa gurifadhigu kama hor joogsan in ay u fekerto una dhaqanto sida dumarka kale. Durba waxay caado ka dhigatay haddii ay wax isku khilaafaan in ay tidhaahdo: ”Jaalle, halkani waa Iswiidhan”. Ujeeddadeeda si fiican buu u fahamsan yahay. Wuxuu yaqaan rag gurigoodii laga eryay oo debedyaal ah iyada oo qiil looga dhigtay weedhaas habaarka qabta.
Marka ay carruurtu sii korto, xaasku sii ilbaxdo, isaguna sii weynaado Rooble waxaa ku sii bata cabsi iyo welwel. Habeenno dhawr ah ayuu ku riyooday isaga oo gaboobay oo guryaha raqayaha lagu tuuray. Habeenno kale wuxuu ku riyooday bilays loogu yeedhay oo aqalka ka saaray. Habeenno kale wuxuu ku riyooday iyada oo intii uu maqnaa albaabka furaha laga beddelay, markii uu garaacayna laga furi waayey oo debedda baraf ku helay. Sidaas oo ay tahay gurigiisu guryaha uguma khilaaf badna ee isaga ayaa sheydaan wadnaha u galay.
أ¢â‚¬â€œ Naa Ismahaan, waa maxay waxa aad gashan tahay? Ha ku bixin sidaas ee wax dhaama qaado.
Sidaas ayuu Rooble maalin maqlay xaaska oo curaddooda siddeed iyo toban jirka ah ku leh. Ismahaan oo albaabka ka sii baxaysa ayuu kor u eegay mise waxay gashan tahay maro lawyaha joogta oo faraqyo leh sidii ay dhul xanan badan adhi ku raacday. Hadalka hooyadeed dheg uma ay jalaqsiin juuqna uma celin ee waa ay iska baxday. Dhanak kale ayuu eegay mise waxaa taagan Axmed oo lix iyo toban jir ah. Isaguna waa kaas funaanad habacsan oo ta hooyadii ka sii weyn iyo wax surwaal u eg oo miskaha hoos uga siibtay ku dhex jira. Waa kaas faraha biro cadcad ku taxay, qoortana gashaday kuul leh midabyada calanka xabashida iyo silis carrabkiisu yahay khariidadda Afrika oo iyaduna leh isla midabka hore. Timaha in uu jaro ama shanleeyo diid oo wuxuu u raamaystay sidii qof waalan. Waqti baas dheereeyaa muxuu xiimayaa! Dadkani miyaanay ahayn labadii shalay caydiga ahaa?
أ¢â‚¬â€œ Waar Axmed, maxaa siliska iyo kuusha kuu xidhay ma dumar baad tahay? Isla yaab oo waxa iska bixi. Surwaalkan xun ee kaa dhacayana iska tuur oo wax ku la’eg gasho.
أ¢â‚¬â€œ Aabbe wuu i la’eg yahay.
أ¢â‚¬â€œ Wuu i la’eg yahay? Haddii uu ku la’eg yahay muxuu kaaga dhacayaa?
أ¢â‚¬â€œ Sidaas baa loogu talogalay.
أ¢â‚¬â€œ Bal wax uu ku hadlayo dhegaysta! Sidee loogu talogalay ma in uu kaa dhaco?
أ¢â‚¬â€œ Ma iga dhacayo dee.
أ¢â‚¬â€œ Waar ma iga dhacayo lahaane waxa iska beddel dibna yaanan kuugu arkin. Timahan xun ee lagu moodo qof waalan iyagana galabta iska soo jar. Ma i maqlaysaa?
Axmed wuu xanaqay oo inta uu qolkiisa irridka xidhay muusig cirka ku dallacay. Muusig lama moodo ee waa buuq, sawaxan iyo qaylo badan oo ka soo baxaya dad aan laga garan waraabayaal raq kala boobaya. Rooble hore ayuu wiilkiisa ugala quustay waxaas dhegaysigooda in uu iska daayo. Maba noolaan karo haddii uusan habeen iyo maalin dhegta ku hayn. Marka uu ku canaanto: ”Waar bal maxaa heesihii afkaaga kuu diiday?” yarku calaacasha gacanta oo ay faruhu fidsan yihiin inta uu sidii neef ragaaday hoos u laallaadiyo ayuu ku jawaabaa: ”Waxaas waqtigoodii waa dhammaaday”. Haa, wuxuu la mid yahay hooyadiisa caadaysatay ”jaalle, halkani waa Iswiidhan”.
Guriga Rooble waxaa ka bilawday gadood uu wax badan maskaxda ku hayey. Waxaa bilawday amardiiddo toos ah. Carruurtu waxay af cad ugu sheegeen ”dad waaweyn baanu nahay ee ha na xukumin”. Islaantuna waxay ugu digtay ”diktatoornimadaada waan ku daalay ee cagaha iga dhig”. Taa waxaa xigtay dhirbaaxo kulul oo Hodan indhaha ka cuskatay. Dabadeed afar habeen iyo afartoodii maalmood ayuu Rooble debedwareeg ahaa oo cid kale dulsaar ku ahaa ka dib markii bilaysku qadaadka qabtay oo aqalka debedda uga tuuray. Dad soomaaliyeed oo samodoon ah ayaa ku guulaystay in ay reerka isku soo celiyaan. Isla markaa Rooble waxaa lagula taliyey run ahaantii halkani in ay tahay Iswiidhan sidaa darteed uu gacantiisa fudaydka ka ilaaliyo.
Sannad kale ayuu Rooble rabbaayad ahaa oo waxa gurigiisa ka dhacaya ismoogaynayey. Run ahaantii inta badan habeenkii ayuu soo hoyan jiray maalintii oo dhanna wuxuu ka murmi jiray kulammada fadhi ku dirir ee ay dadka qabyaaladda ku waashay ku kulmaan iyo aqallada lagu qayilo. Labadaas meelood ayuu xubin firfircoon ka noqday marka laga reebo jimcaha gelinka hore oo uu masjidka u badnaa.
Maalmahan inta uu guriga joogo dhegihiisu waxay maqmaqlayeen hadallo ku saabsan Ismahaan oo hadalhaysa in ay noqonayso wax ay ku sheegtay ”fotomodeel”. In ay sida Iimaan iyo Weris u caan bixi doonto, oo lacag iyo magac yeelan doonto. Wuxuu maqlayey in ay tijaabadii koowaad ka gudubtay. Waxaa maskaxdiisa ka soo miirmay kuna soo xoomay sawirradii ku kaydsanaa kuna saabsan waxa ay yartu ka hadlayso. Naago dhaadheer oo qaawanaan u dhow, kuwaas oo si aan dabiici ahayn isu jejebinaya, oo dad iyo kamardo badan hor marmaraya ayuu xasuusta ka arkay. Curaddiisu ma noocaas ayey rabtaa in ay noqoto? Naxdin, baqdin iyo niyadxumo adduun oo dhan ayaa soo weeraray. Maxaad yeeshaa? Dhulka loo daloolida ma dishaa? Iyo weliba walaalkeeda heeryada xun? Iyo xataa habaarqabtada dhashay? Maya, maya Rooble, mashaqada caqli ku xalli.
أ¢â‚¬â€œ Ismahaan, sow ma ogid waxa aad sheegaysid in ay diinta iyo dhaqanku diidayaan? Sow ma ogid in ay ceeb iyo sharafdarro inoo keenayso? Sow ma أ¢â‚¬آ¦
أ¢â‚¬â€œ Maya ee ma ogi, waxaanse og ahay faqrigu in uu ceeb iyo sharafdarro yahay. Bal arag nolosha aad raali ku tahay. Caydh baad ku nooshahay annagana nagu korisay, haddana shaqo lacag iyo magac lagu kasbado ayaad ceeb ku sheegaysaa.
أ¢â‚¬â€œ Haddii aan caydh idinku koriyey maxaan idinka hagraday? Dhulkeenna markii aynu joognay dhididkayga ayaan idinku quudin jiray ee dhulkan qalaad cid shaqo ii oggol ma aragtay? Waa maxay magaca qaawanaan laga kasbadaa? Noloshuse lacag uun ma aha ee sow in aynu wax kale xeerinno ma aha? Sow in aynu waxa uu qaddarku inoo qorsheeyey ku qanacno ma aha?
أ¢â‚¬â€œ Adigu haddii aad ku qanacsan tahay ku jir, laakiin anigu nolol xun oo aan ka bixi karo kuma qancayo.
Cabbaar ayuu muran dusha ka qabow hoostana dab kaga baxayo la sii waday. Sida uu u xanaaqsan yahay haddana isu dejinayo isaga iyo Ilaahay uun baa og. Iyada uun uma xanaaqsana ee waxaa kaga daran habarta jaan oo intii ay gabadheeda u caqlicelin lahayd xumaanta ku dhiirri gelinaysa. Labadaba waxaa kaga daran Alle qabayga walaalkeed ah ee aad mooddid in aanu reerka ka dhalan. Goorma ayaa la arki jiray wiil sharafta walaashii xil iska saara! Maalmahan ayuuba u daran yahay oo sidii gabadh guurdoon ah dhegaha dalooshaday oo waysaaqyo ka lulay.
Rooble sidii uu doodda u dejinayey ayey mar keliya jiman ku dikadeen, wuxuuna is-arkay isaga oo nabar daydayanaya. Maya, iskaga dhex bax. Albaabka ayuu boobay, wax yar ka dibna wuxuu ka murmayey fadhi ku dirikii uu macmiilka ka ahaa, si uu balaayada haysata isu illawsiiyo.
Miiska uu fadhiistay wuxuu u doortay laba fadhiyey oo ay iscaayi jireen. Waxay haysteen sheeko deggan, markii uu salaamayna inta ay si qabow uga qaadeen ayey sheekadii sii wateen. Maantana meesha uu ka weerari doono wuu ka soo fekaray, ereyada uu sida xabbadaha ula dhici doonana wuu soo urursaday. Intii shaaha uu dalbaday loo soo siday labada kalena sheekadooda gaarka ah gunaanadayeen wuxuu isku madaddaaliyey warqado kuwa wax lagu xayaysiiyo ah oo miiska saaran. Laba baal oo aan macno lahayn markii uu rogay kii saddexaad wuxuu kala kulmay arrin ay indhihiisu diideen maskaxdiisuna rumaysan wayday. Waxaa ku sawiran Ismahaan oo aan calal naasaha kaga maran iyo mid gumaarka kaga daboolan mooyee aan shay kale korkooda saarnayn. Malaha iyadii ma aha? Wallee waa qudheedii! Rooblow magacaa ba! Tanina ma kuu dambaysay!
Wadnaha ayaa garaaca xoojiyey oo shaqada dedejiyey. Sidii qof aad u soo orday ayey neef culusi iska gurtay. Dhidid qabow ayaa dhan walba uga qubtay. Wejiga waxaa ka fuushay labeen guuldarro, caddaankii indhuhuna wuxuu isu rogay xinjir. Wuxuu mooday dadka makhaayadda jooga oo dhami in ay farta ku soo wada fiiqayaan oo ku qoslayaan. Laakin labaataneeyada qof ee meesha fadhiyaa si aan lagu aqoon ayey hoos u wada hadlayaan oo degganaanta soomaaliba lama moodo. Illeen maantaba sheeko iyo qosol aan qaawanaanta Ismahaan ahayn lama hayn. Warqadihii uu sawirku ku yaallay inta uu si dhuuban isugu laabay ayuu la kacay, oo isaga oo aan shaahii cabbin lacagna ka bixin albaabkii uu ka soo galay dib uga baxay.
Ma warwareegin ee gurigii ayuu isku sii daayey. Labadii dumar ahaa oo fadhiga isugu hambalyeynaya sawirkii edebta darnaana dhabta ku haysta ayuu u galay. Dhirbaaxo aad u xooggan oo aan xataa qof la neceb yahay loo quudhin ayuu Ismahaan oo kicid u hoollatay dheg iyo dhafoor ku fujiyey. Iyada oo dalanbaabi ah markii ay dhulka ku dhacday ayuu damcay in uu dul tago oo sii garaaco, laakiin hooyadeed ayaa gacmo waaweyn haddana itaal daran kala hor timid. Iyadiina dhirbaaxo tii hore ka daran ayuu ku masaxay, waxayna ku dul dhacday yartii oo weli daadsan. Feedh, dhirbaaxo, laad, jilib iyo wax kasta uu awoodo ayuu labadii qof isu daba mariyey. Iyaguna intaa waa ay qaylinayaan, oo qaniinyo iyo xagtin intii tabartood ah isugu hiilinayaan.
Rooble wuxuu ku miyirsaday katiinad labadible ugu giigsan iyo koox bilays ah oo ku hareeraysan. Debedda ayaa loo saaray, intii dumarka dacwadda laga qorayeyna isaga waxaa lagu hayey baabuurka bilayska gudihiisa. Sagaal bilood oo xabbis ah ayaa lagu xukumay, iyo in uusan weligii reerka agtooda iman. Markii uu xabsiga dhammaystayna waxaa la dejiyey aqal gooni ah.
Rooble maanta waa shan iyo konton jir cimri degdegay oo toddobaatan jir la moodo. Wax cudur ah iskuma oga haddana wuxuu dareemayaa tabardarro aan xad lahayn. Qaadkii iyo sigaarkii wuu sii laba jibbaaray, haddana dukashadii wuu sii badiyey. Qabyaaladdii iyo murankii wuu ka sii daray, haddana waano iyo hadal waayeel ayuu soo kordhiyey. Habeen isaga oo cabbaar dan la’aan iyo niyadxumo la soo guureeyey ayuu damcay in uu furo albaabka gurigii cidlada ahaa ee uu degganaa. Dabadeed furayaashii ayaa dhulka kaga dhacay. Wuu soo qaaday oo mar kale damcay in uu furo, haddana waa ay ka dhaceen. Markii saddexaad ee ay ka dhaceen ayuu giddigii ku dul dhacay, wuxuuna bilaabay oohin. Murugo iyo caloolxumo ku gaaxday ayaa mar keliya ku wada godladay. Gammuunno oofaha kaga taagnaa uu u adkaysan jiray ayey waabaydoodu mar keliya jidhkiisa iyo naftiisa wada gaadhay. Sidii awr dhuunyeedhis ah ayuu cod naxdin leh oo foolxun sii daayey kaas oo dhismaha oo dhan laga wada maqlay.
Habar Iswiidhish ah oo albaabka kiisa ku beegan ku jirta ayaa daloolka ka eegtay, waxayna markiiba wacday bilayska iyada oo leh: ”Albaabkayga waxaa jiifa neygar sakhraansan ee kaalaya iga kaxeeya”. Laakiin ma ahayn neygar sakhraansan. Wuxuu ahaa nin soomaaliyeed oo ahaan jiray geeljir aad isula weyn, mar kalena ahaan jiray xiddigle bilays ah oo naftiisa u hanweyn. Wuxuu ahaa nin gumoobay oo ka mid ah ummad gumowday
Reply ↓	Colhaye	April 30, 2012 • 17:25	War tokayow ciise yaan la colaysan tol kale malihine takale qolo kasta hadaan colaadsano waa siyaasad xumo ee bahasha hala baandheeyo
Reply ↓	godan	April 30, 2012 • 18:13	Ciise waligoodba waa dagi jireen Awdal siiba xeebaha waana sida colhaye sheegaye cid walba yaanla colaysan dhulkuna waa cidla aan soo wada faaruqinay inagiina waxba ka qabsan kana indho cas nahy waanuhambalyaynaya inamada xariirad isbitaalka ka dhisaya ee ciise .
Reply ↓	godan	April 30, 2012 • 18:16	Darbi sheekada anaaba goob joog ka ahaa runtii kkkkkkk
Reply ↓	Aisha	April 30, 2012 • 18:21	Colhaye maalin dhawayd waax tidhi malaha ilma abtaan nahay markaa waxan filayaa inaad habar cafaan tahay. waxaad tahay qof macquula tolkeen wuuwaashay qof waashaa la daweeyaa lakiin tol waashay dawo malaha maalmahan waxaaban is idhaahdaa tol kale raadso ilayn dumarku cid walba way noqon karaane. malaha waxa iiroon inaan ciise sheegto oon ilkaha qorto kabo saana oo dhegdaloolana tosho daaman kana sarsarto iyakaan isku luuqnehee
Reply ↓	Colhaye	April 30, 2012 • 18:47	Haa waxan ahay habar cafan adigana waxan u qaatay jy inaad tahay hadad tahay j.yonis gayaan kalaba ma lihin markaa ha niyad jabin waa la khayriye waalidana waaban roonahay sidaa somaliyo dhan baa walatay waanan ka baxaynaa insha,allah waanan wadnaa hawsheedi
Reply ↓	godan	April 30, 2012 • 18:58	dumarka ciise waxan ka arkay iyagoo reer magaala labisna dhameeyay kana bashaash san soomaalo dhan dad la dhaqana le kuwa caasha sheegayso malaa waaumadihii hore kkkkkkkkkkkk hada waxaalaga bax waa ku sidee huuno
Reply ↓	Aisha	April 30, 2012 • 19:09	godan macaayaayo dumarka ciisaha labiskooda waaba astaan quruxbadan laguna garto reer magaal waa iskuwada mid diracna tukaanka waa wada buux laa kiintani waa special for them ana waax jecelahay dhaqankuna waa wax lagufaano
Reply ↓	godan	April 30, 2012 • 19:19	caasha baryahan jacayl ciisaa i galay gadabursi ayaan nacay sidaada kkkkkkk kaligaa maaha imikase miyigiiiyo hidiheenii horaba waa soo dhamaanayanmeel kasta dhulka soomaaliyed hadaad waqti hesho mar ii soo sheeg inagana astaamahena kolaba dad kala dheer ma nihinsaanfilayo
Reply ↓	Ali-Durgiye	April 30, 2012 • 19:35	waxay gaar u tahay raga mahadcase, gedabuursiga kaloow meel naga fadhiista balaayo la ilka waynaadee kkkkkkkkkkkkk
sidaa miig la jeeraariyo lagu jihaadayo jidku roobku dhabay jimicsibaan moran ku diida dheh.
tanaan degay: http://www.trenchfighter.homepge.t-online.de/188001/257522.html
Reply ↓	Ali-Durgiye	April 30, 2012 • 19:48	Dadka qaarkii haddaay u soo bixi wayddu sidaan
hoos ku quraan ha ku raadshan.
somaliland 1884-1898 hana akhristaan qaybta saylac ku saabsan iyo ciise cadde kkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Reply ↓	Mustafe	April 30, 2012 • 19:53	Awdalstate wey joogtaa oo jiri doontaa ee cidii diidani iney maryo madaxa kusoo duubato wa mid iayda utaala. Wixii kale ee la kala tabanayaayo waa ka gaar jurooyinka Samaroon xumaan ka sheegooda ha moodin inaad xulafooyin ku sameysan waabey kaaga sii dari.
sheekadaadu waa J/yoonis baan iska xoreyneynaa. Nasiib darose H.Jeclo xinaanttey kuu soo tumaan Ciise waxba kaga qaadi meysid adigoo siyaasad kale la yimada mooyee.
Maanta Ciise dhibaato iniguma hayaan, dhulbalaadhsigana Soomaalidey kala mid yihiin. Intaad ciise ku mashquulsan tihiin horta ma iswey diiseen siyaadan aad wadaan oo kusoo urureysa Tolaay Jibriir Yoonis baa labaatan sanadood na jeeni qaarey miyaaney ka habooney inaad gaashaan kuu gaara tumataan.
Halka aad ka leedahey kuwa Harowo H.Yoonis baa ku weyn sowdigan arki la maqaalada SNM laga soo xiganaayo ee ku shaabadeynaaya Harowo.
Reply ↓	Tallman	April 30, 2012 • 20:15	Horta Mustafe looma baahna in J/Yoonis layska xoreeyo,laakiin adaa u baahan in lagaa xoreeyo cuqdada kugu gaamurtay iyo xafladaha aad ugu magac dartay Awdal State aad ku ceeboowdeen Isaaqna waad ku qarawdaa u niikisaa iska qarisaa xitaa Awdaahir State ileen maskaxdaad ka dulaysantahoo in ay ku garaacayaan baad u malaysaaye so adiga anaa kaa xoraynaya Ogaadeen,laakiin hadii aan Somaliland raaco iyo hadaan Awdal goosto,adiga waxba lagaa weydiin maayo”so mind your Business”.@Miss Darbi nin baa inantiisa ka xumaatey iyo Sweden baan ka duulay iyo naayaa miss Darbi topic ga la soco lool mise qaadkii Yemenbaa marqaan kaa tusey Sweden!
Reply ↓	Darbi Samaroon	April 30, 2012 • 20:31	Tallman
Maxaad iila yaabi sawdiga adba qardajeexaaya ee caayaaya tolkaa JY Adigoo doonaaya inaad noo faaniso Axmed Siillaanyo iyo dawlada Habar jeclo adigoo isku haysta nin hj xoraysay oo la gumaysan jiray ka hor,Adeer Axmed Siillanyo iyo Muuse Biixi waa khamriilayaay habeenkii oo dhan ayay soo jeedaan sidii ay dadka iskugu diri lahaayeen ayay usoo jeedaan habeenkii oo Axmed Siillaaanyo kuris jacayl xafiiskiisa kursiga kama kaco wuu ku seexdaa kursiga oo sida Muuse Biixi ugu sheekaynaayo ayaa dhalooyinka ayay iska ururiyaan subaxda inta aan dadku imanin shaqaalaha ka hor.
Dahirna waatan sidan looga cabaadaayo ee Axmed Fooxle oo rooxaan adeegsanaaya ay tustay Dahir Rayale inkasta oo aan jeclaa anuu in aanu Dahir Rayale kusoo noqon SNM.
Axmed Fooxle Vs Dahir Rayale
Reply ↓	Tallman	April 30, 2012 • 21:02	@Darbi Samaroon kursiga Soomaali oo dhan baa jecellaakiin adiga aniga waxaan kaaga duwanahay kolba meel baad isku qaadaa,niyoow Silanyahan aad sheegayso I don’t like him either,laakiin kala saar Somaliland iyo Silanyo.Somaliland waa wadankayga waanan jeclahey ,laakiin Silanyo waa shakhsi saan hore u sheegayna wuu iska tagi doonaa,laakiin Silanyo iyo HJ uga tagi maayo Somaliland,laakiin aan 1 suaal ku weydiiyo maxaad ugu dabaal dagi weydeen Awdal State Awdal gudaheeda bal ii sheeg,sanadka dambaan ku qabanayaayo iyo jawaabahaa iga daayee anuu waan ogahay jawaabta laakiin bal ii sheeg ileen anba Maamul .comgoboleed aan Internet ka sameeyey dibadahaba waan ka dhigi karaaye.
Reply ↓	SAHAL	April 30, 2012 • 21:31	Marunbaa,
Marar ka qaar waxan swaydiiyaa siday wax kaa yihiin oo xatta waxa ku dhaama Awoowgay oo markuu doona iska caytama isaguse qiilbuuba taas u helay oo biyihii Burdigaa keenay waa siduu haddalka u dhigee.
Waan fahmay in uu yahay Laas-dhuurahaad maqashay kaan qaano een arkey, geel Ciisna ag daaqo, dabcan mid Gadabuursi iyo mid Isaaqba meesha way daaqaan. Markaan buurta Ciinka sheegay inaad iga gabatay ahayd dee buurtaasi waa mid ka samays duwan buuraha kale ee dhulkaas kua yaala. Meeshana doox qudhahi ma’ maree dhowr baa wada maraa xaawa bidaadu iyayna ku liqine joogso.
Reply ↓	SAHAL	April 30, 2012 • 21:41	Marunbaa,
Waliba waxan kuugu dari in uuna maanta laas-dhuure geel Gadabuursi jirin oo xagaa iyo Cali-xaydh loo riixay wixii ka dambeeyay dagaalkii sokeeye. Waxan filayaa in aad dhegaha ka maqashay Caada iyo waxa ka taagan, dhegahana sidoo kale ka maqashay Caada iyo Laas-dhuure intay isku jiraan.
Reply ↓	gudoon	April 30, 2012 • 21:49	ogaysiis,,, xafaladii ugu waynayd abid ee sanadguuradii labad ee awdalstate oo ka dhici doonta ottawa canada in 2 weeks waxa halka ka hesi doona fanaaniin waawayn oo somaliyed waxa laga iman doona canada oo dhan ha moganina ,,,viva awdalstate of somalia
Reply ↓	SAHAL	April 30, 2012 • 22:08	Haboon,
adiga waxaad i tidhaahdaba, haye habo(inabti haddaan odhan lahaa waa intaasu odaygu khalad u qaataayee kkkkk) wax aan ahayn haddan ku idhaahdo afku ha i guduuto.
Lkn waxan ku waydiiyey sideed ciyaalka Ciise edo ugu tahay mise waa tii heestii Edaan la yaabee, arxankeedu daranaa …….?????????
Reply ↓	Walo	April 30, 2012 • 22:22	geelii maxadcase iyo damerihii maakaahiil ayaa meesha isku helay
Reply ↓	JIBRIILYOONIS	April 30, 2012 • 22:36	Waa yaab Gudoon ma xaflad uunbaan huuno kujiraynaa? miyaad lacagtayar inoo haysaan o aad mashaaric waxtarta dhulkii ugu samaysaan mise intaan habar cafaan iyo mahadcase ka daadiyada hayno ayaan ku caydhoobaynaa
meeshan Hiildan horta marmar baan soo galaa wabase kumo qoro ee waan daawadaa uun runtiina Hiildanyare wax yaalaha uu reeraha makaahiil amaba j/y ku xanto waxbaa kajira sida carsaanyada iyo nolol quudhis la’aanta aanay tolkooda kale waxba u quudhayn markaa waxan odhan lahaa bal horta makaahiil ha isku noqdo oo go’aan hasoo gaadho ama gaar gaarba ha u shiraan oo badhkood uuni aqli ha yeeshaan nabadeey
Reply ↓	Tallman	April 30, 2012 • 22:37	Maya Maxad Casi waa Faras Qooqan Jibriil Yoonisna waa Baqal.
Reply ↓	Walo	April 30, 2012 • 22:38	hadii hal iyo hal lasoo qaado. sida Awr iyo Dameer waxba kuma kala duwana.labaduba waa xoolo. midbaa hilibkiisa la cunaa midna lama cuno. labadaba waa la rartaa, cidii raratana dankama laha, gaal iyo islaan, labaduba waa hayin. midbaa dhuuso badan inta kale waa iskaga mid.
Reply ↓	Tallman	April 30, 2012 • 23:02	J/Yoonis talo fiican baad siisey tolkaa saambuusaha iyo Cakega ay cunayaan Reer Koonfureed badiyaa majority ka ah Xafladaha Awdal State tolkood oo ku gaajoonaya Harowo ilaa Quljeed baa u baahan @Walo waligaa Qulijeed ma tagtay,marka aad gashaba waxa kaa soo hor baxaysa buur ay ku qorantahay ” Degmada Qolujeed waxana ku barbar sawiran Calanka Somaliland,markaasey anaga sheeko ciyaal noola imanayaan,marka aan ku leeyahay Faras iyo Baqalna ha u fasiran xayawaan uun waa maahmaah Somali sax ah oo 2daas midna uu atalayo nin wax garad ah ka kalana qof dhoohan ee rarasho iyo waxaas meesha ma yaalaan bro.
Reply ↓	Marunbaa	April 30, 2012 • 23:17	Durkiye, link sax ah keen waxan se kuu sheegayaa in aad ka hadlayso wax aan hore usoo arkay. Isaaq oo inala dad iyo deegaana ayaan kala aqoon ciise iyo maxadcase xeebeed markaa in aad taariikh qoraal nin tahriib ahi meel ku qoray ama dhacdo kooban kaga hadlay doodka keento waa iska caadi. Show me the link please since I love reading that stuff. Ciise cade maqlay balse waxan garn waayey markay madoobaadee. Ma binu hashim ka bixii bu raacay.
Reply ↓	gudoon	April 30, 2012 • 23:58	xaflada awdalstate cidna laguma xumaynayo waxan rabna in aan aduunka iyo somalia tusno in aan nahay maamul goboleed ka madax banan meshan isku magacowday somali land waxan nahay awdalstate all samaroon xaflada way u furan tahay ee mr jibrilyoonisow sidaa ula soco wlcome to xaflada wayn ee ka dhici doonta ottawa canada 19may oo ah maalin sabti ah
Reply ↓	Marunbaa	May 1, 2012 • 03:18	Sahal waan ku salamay waxanan kuugu bogay indho adayga. Durkiye aqli buu isku dayaa in uu moran kiisa ku qarsado balse aduu indho xayd dhaladaa tahay. Maanta geel ciisaa gabilay waqooy bari ka xiga ma i tidhi. Anuu gacan taan kuu taagee waa halkaad Galbeedi ka gashaa. Adi awaw gaa ciilbaa wx ka kenay anise awawgay wuxuu ka mid ahaa duruuftii Cali Bucul ka hadlisey ee ka keentay dhaadashadii ahayd Bula xaar garabkeeda iyo golahii harawo, galab buu isku maraaye ma daruur gudgudaa. Markaa waa suurta gal in aad adhi ku raacday ood dhulka iiga aragti badiso balse wax waan ka aqaan warkeedna wuu igu dhan yahay
Reply ↓	Tallman	May 1, 2012 • 04:03	Ma runbaa sxb waxa aan ku weydiin lahaa in aad ii sharaxdo 3magaalo cidda degta.1Bulaxaar,2Gabilay 3.Wajaale oo aan ku ogaa Samaroon oo Maanta Isaaq magaalo ganacsi u ah.Waad mahadsantahay.
Reply ↓	Marunbaa	May 1, 2012 • 05:41	Bula xaar sidaan ku maqlay ma ahayn magaalo si rasmi ah loo degay markii ugu horeysay taariikh ahaan ee waxan maqlay in wakhtiyadii Abssinia iyo musliintu is laayeen saylac dib looga guuray oo ay si ku meel gaadh ah magaalo u noqotay balse markii danbe saylac iyo berbera loogu kala guuray waxayna caan ku noqotay oo kaliya waa magaalo ingiriis si rasmiya u magaaleeyey oon ahayn magaalo ku dhisantay ilbax nimadii muslimiinta gaar ahaan oatoman ka sida saylac ama Berbera oo kale. Waxay taariikhda burburka ku mudatay nin caan ahaa oo marines ingiriiska kka mid ahaa baa lagu dilay waana magaaladii ugu horaysay ee dadkii deganaa maraakiib bada joogtaa weerarto. Waxay sidoo kale ahayd sobob tii ka danbaysay in dhamaa maalka somalida la baabiiyo wax bad ku jira iyo wax bari yaalba. Marlay hadaad taariikhda akhrido dhacdooyin badan oo tan pirates maanta u dhigmaad ka heli kartaa iyo dhaqaalaha somalidu intuu leekaa gaar ahaan inta u dhaxaysa Berbera iyo Obock oo runtii Canfartuna cudud ku lahayd. Degaan ahaan waxa lagu yaqaan degaanka isaaq iyo Samaroon kulmiya waxanad ka dheehan kartaa gabaygii Cali Bucul. Wajaale waxan u dhaafi lahaa Dumis Samaroon inuu horta ku silsilbado oo iyadna oday rer xareedihi waa kii lahaa markuu reer yoonis la hadlayey. Cishiriin yabareeyaad bankii cawshu degaysay uga soo cararteene anaa caanano ku siiine waa inoo casarka. La soco reer yoonis waa raga hada deegaanka ugu cudud wayn. Ta wajaale halkaas baan kaga baxay waanan kuu sheegi doonaa waxaan taariikh run ah ka aqaan.
Reply ↓	Marunbaa	May 1, 2012 • 05:49	Gabiley iyada nin Galbeedi la yidhaa baa sheekadeeda dhameeyey runa ka sheegay sidoo kalana waxay ahayd magaalo xigto iyo is dhal ku dhisantay markii danbe se noqotay tuuladii maronka iyo kala guurka deegaanka. Iyadna waxad raadisaa gabay tima cade ugu jawaab celinayey gahayr oo geeljire reer bari ah markuu ku daan daansaday gabaygii ahaa, Ma af gorow cunaa ani igaadhaaye. Raadi jawaabtii tima cade aniga hada way iga yar hoos baxdee inkastoon soo heli doono. Jawaabtuna gabaygay ku dhax jirtaa saaxiib.
Reply ↓	SAHAL	May 1, 2012 • 08:12	Marunbaa, Waa ogaa sidaan horeba kuugu sheegay in aad dhegta uun ka maqashay doox Laas-dhuure la yidhaahdo, maskaxdaaduna waxay kuu sawirtay in uu Gabiley ku hoose yaal kkkkkkkkk
Mida kale aan kuu saxee qofkii qoxootigu Laas-dhuur deganayeen ku yidhi wuu dhaweeyay lkn waxay dhegenaayeen isku darka Maroodiile, Adhicadeeye iyo Dur-Dur, Laasdhuure qiyaas ahaan meel 2 km galbeed-bari ka xigta ayuu kaga daraa dooxyadan, dabadeedna waxab biji ayaa la siku yidhaa, tuuladda meesha ku taalana Gabiley lama yidhaahdo ee Galbeedi soo daa hadduu Bahar-aadan yahay kkkkkkkkkkkkk haddi kale Gadabuursi dhege-wayne oo Buq degen ayaa kuugu dhow ee qaylo diro.
Bulaxaar iyada warkeedaba kula galimaayo oo nin kaaga aan aqoon ahaan soo dhaafin dooxa Dur-Dur dee sideen uga wada haddalaa xeebta bari.
Calaa kuli xaal, Buur iyo Baadiye nin laa, ama ka ag-dhow ayaa adhi ku raaca, wixii aan indhahayga ku soo arki jireyna haddaad indho-adayg ku sjheegtay adna waxaa sow madax adayg maaha xataa aanad ka xishoon waar meeshan waa lagaa yaqaanaaye gaabso.
Reply ↓	Ali-Durgiye	May 1, 2012 • 08:13	Bamba xuladleh gaalba xadh kaleh xamagna geedba leh,
daadbaa cadad maraa ragba col iyo daabaan leh,
tani kalanaa waan degay:
SOMALI CLAN POPULATION IN 1890
Marunbayoow ne gargarrir pas mon cher marag iyo markhaati keenso kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Darbi Samaroon	May 1, 2012 • 08:45	Tallman
Gabiley sidii looga baro kacay 1988-kii wali cid Samaroon ah oo degtay ma jirto,Bulaxaar waa meel qadiim ahayd oo hada aanay cidina deganayn Dhulkaasi aad sheegtay waxaa dega hada SNM oo xoog ku haysata Wajaale Reer Nuur iyo J/Abokor ayaa wada degan wax dhib ahina kama jirto dadkaasi waa dad is ogol baayac mushtarkana waa la wada haystaa meheradaha oo waa la iskasoo horjeedaa lacagta waa laka sariftaa bagashka iyo kotorabaankana DDS ayaa lagu daabulaa wax dhib ahina ma dhextaalo dadkaasi wada degan waana dad walaalo ah ilaa intii wadanka lgausoo noqday lkn meesha aan cid Samaroon ah laga ogolaynin waa Gabiley oo ay xoog ku haystaan SNM Baho Samaroon guryahoodii beerahoodii way wada iibiyeen waxaa dhulkaasi ku hadhay Reer Nuur iyo Jibraacin kaliya intii kale way soo xaraasheen hantidoodii waana kuwan hada ka dhex toosay JY iyo Borama ee leh ehlu beyt baan nahay adeer Vote-ka golaha deegaan ee soo socda lama ogola in nin u dhashay Gabiley uu ku rido Vote agaarka Borama iyo Dila dhulkiina ku noqda waa idinkaasi isku dhadhajinaaya SNM ee dhalasho habar jeclo qaatay wax la qaybsada oo Gabiley kasoo baxa hadaad tihiin Bahabar Cabdallo,Bahabar Aadan iyo Bahabar Abokor.
Borama waxaa ka Voteynkara Jibriir Yoonis ,HC dhamaantood oo aanay ku jirin Dhagaweyne Bus yaal,Reer Nuur oo badh ah,Reer Maxamed intaasi kaliya ayaa Vooteyn doona agagaarka Borama iyo meelaha ku dhaw intii kale ilaahooda ha u meherad doontaan.
Waxaa loo sheegayaa dhamaan Samaroonka kale waa inay iska xaadiriyaan ninkastaa meeshii uu u dhashay sida xeeb iyo Galbeedka Gabiley ama Wajaale Borama kusoo wada ururtay adeer ka yaaca inta aan la idin beylin ee aan la idin solin xaalku waa qadhaadhyahay C’est pas toujours dimanche,
Adeer iska riixa ninkastaa hakasoo baxo dhulkiisa iyo deegaankiisa,Bahabar Cabdallo , Bahabar Abokor iyo Bahar Aadan xagaa iyo Gabiley haka Voteeyaan sidaa oo kale Bahabar Celi,Abreiyn iyo Baharbar Muuse waa xeeb Lawyacado, Zeiylac iyo Lughaya ninkasta dhulkiisa looga yeedhayaa ku dagaalama hadii aad kasoo bixi weydaan oo la idin yidhaa Borama taga hadii ay sidaasi dhacdo oo aad Borama ka wada Voteysaan xaalku waa halis oo qiso ilaa 1960-kii soo socotay looma dul qaadan doono arintaasi ninka dhulkiisa kasoo carara ee is yidhaa ka Votee dhul aanu u dhalan waa doqoniimo inaad qayrkaa ugasoo carartaa dhulkaaga iyo dheeftaada.
Reply ↓	Marunbaa	May 1, 2012 • 15:36	Durkiye, wali link sax da ah ayaan kaa rabaa waxan oo gabay baashaa dhuqana iska dhaaf. Sahal, waa sidaan kuu sheegay dhulkana anoo yar aan ka socdee waan kula aqaan muhiimaduna waa magaca xerada qaxootiga la odhan jiray waxuuna ahaa Laas dhuureh waana magacii asalka ahaa xeradaa loo yaqaanay balse dooxyadu meeshay doonaan ha iskaga daraan. Inaad naturalist ahayd ood dhirta dhulkaas baran jirtay iyo inaad dhuxuleh ka ahayd ood dhirta dabar goyn jirtay sahaloow waxba kama dhaxeeyaan.Hadiise aad Google earth noogashay iyadna waa halkeeda waxadse tahay xog ogaal abti fiican leh that Abti must be Bahabar Muuse from Caada looool. Waan kus alamay sahal. Dumis mid baanku raacay oo Baha-samaroon tarxiil dil ku waajibay borama uga baahan yahiin waxanse kuu sheegayaa in gabilay la wada degan yahay ilaa hada cid wax u dhintaana jirin balse inta maqani biyahii urdi bay dhandhansheen baan u maleeyaa mise wa kuwii dhamuugeed?
Reply ↓	Galbeedi	May 1, 2012 • 17:53	Dooda aad baan u dhagaystay meel fiicana waad mariseen wajaale waa la wada dagan yahay oo waa goob ganacsi halagu kala badnaadee gabiley dee maxamed case ha kala reebin iyo gb oo isku marain ilaa reer nuur baa wada dagan oo waa dad wada dhashay qofna qof magaalaada kama xigo oo waad ogaydeen barlamankii ina maxamed case cali gabilay sharaxdeen oo cod aad u badan u ku soo baxay oo xitaa awoodaan in ay 3 ama 4 qof laa soo baxaa markaa taasi waa taas
ciise runta ilaahay baa jecel anuu hadaan gabilay ka dhaqaaqo oo aan jabuuti u baxo dee ciisaha ugu horeeya lawga oo qaybta shishe ah baan kula kulmaa iska daa in ay gabilay meel u dhaw joogaane lkn saaylaca way dagan yihiin lkn waa laga badan yahay oo dee sida jabuuti ay isaaq iyo samaroon minorty uga yihiin bay saylac uga yihiin yagauna minorty oo magaalada waa magaalo maxamed case lkn siyaasadii dahir ee quracnayd baa halkaa gaadhsiisay badhasaabka hadii laga dhigayna maaha micnaheedu magaalada ayaan u badanahay
markaa dee waa sidaa lkn qofkii mur mayaa ha iska murmee dhula samaroon waaba dhul yar oo muran uma baahna lkn ciise haduu leeyahay anuu ina binu ahmed baan ahay isaga iska wada leh oo dee isaaq baa ii dagan waan garanayn taasi!!!
sanadka waan soo socdaayee hablo wacani reerkii reer nuur ahaa ma u kaceeen waan min yaraysan rabaayee loolz
Reply ↓	aadan cade	May 5, 2012 • 16:41	waar beeta iska dhafa iyo khiyaliga meesha runta lo bahan yahay maxaed case haduu dad yahay xeebtuu camiri lahaa oo magaalo boorama leeg ka samyn lahaa waanan ku farxi lahayn lakiin haday tuulo camiri waayeen maxaa rayaala dhul naga qaday da lahaynayaan may camiraan uun lughaya ama saylac war anu dhulka xeebta kuman arag dad ee geedo uun ban arkay
Reply ↓	Marunbaa	May 5, 2012 • 19:01	adiga oo aya ah Aaadan Cade, miyaanad aduu Rayaale ka sii arin xumayn marka la eego sidaad u hadlayso. Rayaale warqadaha si kale ayuu u raadsan lahaa laakiin in uu reer tolkii dhaxal wareeejo ma ahayn. Waa intaa uun waxa laysu haystaa hana u qaadan in maxadcase oo kaliya laga hadlayo ee waa dhul samaroon.
Reply ↓	Tallman	May 5, 2012 • 21:51	@Ma runbaa thank you saad uga jawaabtey su aasheyda.
Reply ↓	Salal	May 6, 2012 • 09:27	Waxa maanta la beddelay Guddoomiyihii maqaar-saarka ahaa Ee Riyoole Xeebta dhigtay si Uu tolkii ugu jabsado,ninka hadda yimid ayaa magiciisa lagu sheegay NUUR Cismaan Guuleed,haddaba ma laga yaabaa in isna maqaar-saar yahay si Saylac loogu dhiso qaab haloosi ah iyadoo laga faa’idaysanayo dawladnimada Jibuuti Ee ay Beelaha Saylac ilmo-Abtiga yihiin?
Tima-cadde waxan leehay Arrintii Hc iyo Jy horey u dhammaatay adeer Ee dhinac kale uga lugo duwo
bal ka faalooda!
Reply ↓	radwan xasan	October 1, 2012 • 22:38	ha waa run gabadhaa inadeertay ayaa run sheegtay ee samaroon aamuska ha iska daado oo dhulkiisii lawyacadu ilaa gabilay ha soo ceshado oo runta ha isku sheego alaal nagu beeray dhulka oo noo gartay ciise iyo idoor maxaa nabaray baqortoyadii asalka aan u lahayn mee ma reer banu israaiil oo idoor ah iyo ciise cawaan ayaa badalay anu garan maayo samaroonow garo dantaa oo amuska daaa
Blog Stats	1,248,866 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)
BBC SomaliAjnebi ayaa ka mid ah dadka dhintayMaraykanka oo la hadlaya TaalibaanBurcad badeedda Soomaaliya oo laga bataySoomaaliya oo ka qeyb gashay shirka G8Iran oo madaxweyne cusub yeelatay VOA SomaliAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. The New York TimesMilitants Attack U.N. Compound in Somalia’s Capital Pictures of the Day: Brazil and ElsewhereWest African Piracy Exceeds Somali Attacks, Report SaysPolio Reappears in the Horn of AfricaBritish Officials Knew Suspect in Soldier’s Death Had Ties to Al Qaeda	Blog at WordPress.com.